ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဖေဖော်ဝါရီလထိ) နိုင်ငံအလိုက် (ပင်လယ်ရေကြောင်း+နယ်စပ်) ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ | Commerce
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဖေဖော်ဝါရီလထိ) နိုင်ငံအလိုက် (ပင်လယ်ရေကြောင်း+နယ်စပ်) ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ
Wed, 04/22/2020 - 06:54 -- dccaadmin
စဉ် နိုင်ငံ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (ဖေဖော်ဝါရီလထိ)
၁ AFGHANISTAN ၁.၃၇၇ ၁.၃၇၇ ၀.၁၁၅ ၀.၁၁၅ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇ ၀.၁၀၅ ၀.၁၀၅ ၀.၀၂၇ ၀.၃၇၅ ၀.၄၀၂ ၁.၉၃ ၂.၈၇၁ ၄.၈၀၁ ၁၇.၁၆၇ ၀.၉၉၉ ၁၈.၁၆၆ ၀.၈၅၉ ၀.၈၅၉ ၀.၀၅၁ ၁.၄၃၈ ၁.၄၈၉ ၀.၃၆၅ ၀.၃၆၅
၄ AMERICAN SAMOA ၀.၆၄၂ ၀.၆၄၂ ၀.၀၃၀ ၀.၀၃၀ ၀.၁၇၄ ၀.၁၇၄ ၀.၃၇ ၀.၃၇၀ ၂.၂၉၀ ၂.၂၉၀ ၁.၇၄၆ ၁.၇၄၆ ၀.၂၇၅ ၀.၂၇၅ ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၅ ANDORRA ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၆၉ ၀.၀၆၉ ၃.၇၉၅ ၀.၀၀၇ ၃.၈၀၂ ၁၅.၅၃၁ ၀.၀၅၈ ၁၅.၅၈၉ ၀.၈၀၈ ၀.၀၀၇ ၀.၈၁၅ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
၆ ANGOLA ၀.၁၁၃ ၀.၁၁၃ ၈.၁၂၂ ၈.၁၂၂ ၀.၀၀၁ ၀.၀၆၂ ၀.၀၆၂ ၁.၉၂၉ ၁.၉၂၉
၈ ANTIGUA AND BARBUDA ၀.၁၅၉ ၀.၁၅၉ ၀.၂၉၂ ၀.၆၈၄ ၀.၉၇၆ ၀.၀၈၄ ၄၁.၂၇၁ ၄၁.၃၅၅ ၀.၁၅ ၀.၄၉၆ ၀.၆၄၆ ၀.၉၂၉ ၀.၉၂၉ ၀.၈၇၁ ၀.၈၇၁ ၀.၀၈၃ ၀.၀၈၃ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
၉ ARGENTINA ၆.၅၄၆ ၃.၂၉၉ ၉.၈၄၅ ၆.၀၃၅ ၄.၃၀၆ ၁၀.၃၄၁ ၅.၄၄၄ ၁.၈၄၉ ၇.၂၉၃ ၁.၄၃၂ ၃.၀၆၁ ၄.၄၉၃ ၂.၄၈၅ ၁၀.၉၁၈ ၁၃.၄၀၃ ၄.၁၅၂ ၇.၀၂၂ ၁၁.၁၇၄ ၆.၀၇၂ ၈.၇၇၄ ၁၄.၈၄၆ ၃.၂၇၂ ၁.၁၂၅ ၄.၃၉၈ ၃.၅၈၁ ၂.၃၉၆ ၅.၉၇၇ ၁.၀၁၆ ၁.၆၁၇ ၂.၆၃၃
၁၀ ARMENIA ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃ ၀.၂၂၆ ၀.၂၂၆ ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉ ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅
၁၁ ARUBA ၀.၁၄၉ ၀.၀၀၈ ၀.၁၅၇ ၀.၇၁၃ ၀.၇၁၃
၁၂ AUSTRALIA ၈.၆၃ ၆၉.၀၄၃ ၇၇.၆၇၃ ၈.၉၅၅ ၇၇.၀၅၄ ၈၆.၀၀၉ ၁၂.၄၃၄ ၈၉.၆၂၉ ၁၀၂.၀၆၃ ၉.၃၀၃ ၆၄.၇၀၉ ၇၄.၀၁၂ ၈.၆၂၅ ၇၆.၀၂၉ ၈၄.၆၅၄ ၂၃.၂၄၈ ၁၂၁.၁၃၇ ၁၄၄.၃၈၅ ၂၁.၉၀၁ ၁၄၉.၀၀၃ ၁၇၀.၉၀၄ ၁၂.၀၆၁ ၆၂.၆၂၈ ၇၄.၆၈၉ ၂၈.၀၈၈ ၁၃၄.၁၇၄ ၁၆၂.၂၆၂ ၁၁.၂၂၁ ၃၉.၆၄၁ ၅၀.၈၆၂
၁၃ AUSTRIA ၇.၁၇၇ ၀.၆၇၅ ၇.၈၅၂ ၅.၆၀၇ ၀.၈၉၆ ၆.၅၀၃ ၀.၉၉၅ ၀.၄၈၁ ၁.၄၇၆ ၄.၉၉၉ ၀.၂၃၅ ၅.၂၃၄ ၃.၂၁၈ ၀.၁၉၃ ၃.၄၁၁ ၁.၄၀၈ ၃.၈၇၄ ၅.၂၈၂ ၂.၂၇၃ ၉.၃၆၄ ၁၁.၆၃၆ ၁.၇၇၈ ၅.၆၁ ၇.၃၈၉ ၂.၇၉၈ ၁၆.၇၇၆ ၁၉.၅၇၃ ၀.၅၅၂ ၆.၉၃၂ ၇.၄၈၄
၁၄ AZERBAIJAN ၀.၁၂၆ ၀.၁၂၆ ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅ ၀.၀၆၇ ၀.၀၆၇ ၀.၀၀၈ ၀.၀၅ ၀.၀၅၈ ၀.၀၁၆ ၀.၀၁၆
၁၅ BAHAMAS ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၅၈ ၀.၀၅၈ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
၁၆ BAHRAIN ၀.၁၄၅ ၀.၁၄၅ ၁.၂၉၆ ၀.၀၀၁ ၁.၂၉၇ ၀.၆၀၅ ၀.၀၁၅ ၀.၆၂ ၀.၈၀၃ ၀.၁၆၉ ၀.၉၇၂ ၁.၃၁၁ ၁.၃၁၁ ၁.၀၂၁ ၀.၀၃၈ ၁.၀၅၉ ၃.၁၀၄ ၀.၀၇ ၃.၁၇၃ ၃.၅၂၇ ၃.၅၂၈ ၁၅.၉၈၉ ၀.၀၇၁ ၁၆.၀၅၉ ၇.၇၇၅ ၀.၀၇၃ ၇.၈၄၉
၁၇ BANGLADESH ၇၀.၅၈၆ ၁၄.၂၂ ၈၄.၈၀၆ ၃၁.၀၈၇ ၁၂.၁၇၈ ၄၃.၂၆၅ ၅၉.၀၉၁ ၁၅.၉၂၃ ၇၅.၀၁၄ ၃၀.၀၈၂ ၉.၁၄၉ ၃၉.၂၃၁ ၁၈.၁၂၅ ၁၅.၂၅၉ ၃၃.၃၈၄ ၂၃.၉၉၆ ၁၉.၉၆၃ ၄၃.၉၅၉ ၁၇၀.၀၄၅ ၂၂.၂၅၃ ၁၉၂.၂၉၈ ၂၃၀.၀၅၅ ၁၂.၆၄၁ ၂၄၂.၆၉၆ ၆၃.၁၉၈ ၂၇.၈၀၇ ၉၁.၀၀၅ ၃၄.၇၉၈ ၂၉၂.၄၂၃ ၃၂၇.၂၂၁
၁၈ BARBADOS ၀.၇၇၃ ၀.၇၇၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၆၉ ၀.၀၆၉ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇
၁၉ BELARUS ၀.၀၅၆ ၀.၀၅၆ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၅ ၀.၁၉၉ ၀.၂၄၉ ၀.၁၁၉ ၀.၁၇၇ ၀.၂၉၆ ၀.၀၁၆ ၁.၆၀၆ ၁.၆၂၂ ၄.၁၈၄ ၄.၁၈၄ ၂.၇၅၄ ၂.၇၅၄ ၀.၀၁၅ ၁၁.၅၅၃ ၁၁.၅၆၈ ၀.၀၁၁ ၃.၅၁၇ ၃.၅၂၈
၂၀ BELGIUM ၆.၇၄၄ ၄.၄၂၉ ၁၁.၁၇၃ ၁.၄၈၆ ၃.၈၈၇ ၅.၃၇၃ ၇.၀၃ ၁၈.၄၃၁ ၂၅.၄၆၁ ၁၇.၇၁၂ ၇.၁၈၃ ၂၄.၈၉၅ ၂၄.၂၄၆ ၅.၈၅၄ ၃၀.၁ ၇၇.၅၆၅ ၃၄.၅၅၃ ၁၁၂.၁၁၈ ၁၅၁.၁၇၅ ၃၀.၈၁၄ ၁၈၁.၉၈၉ ၁၁၄.၈၉ ၂၀.၉၄၂ ၁၃၅.၈၃၂ ၂၁၈.၇၄၅ ၃၅.၅၉၁ ၂၅၄.၃၃၆ ၉၈.၉၃၂ ၁၆.၂၅၁ ၁၁၅.၁၈၃
၂၁ BELIZE ၀.၉၀၇ ၀.၉၀၇ ၀.၈၇၅ ၀.၈၇၅ ၀.၀၂ ၀.၉၉၅ ၁.၀၁၅ ၀.၀၃၉ ၁၄.၂၇၈ ၁၄.၃၁၇ ၂၉.၂၂ ၂၉.၂၂ ၀.၀၃၅ ၁၀၉.၁၁၅ ၁၀၉.၁၅ ၀.၀၄၁ ၄.၁၅၆ ၄.၁၉၇ ၀.၁၈၄ ၀.၃၂ ၀.၅၀၄ ၀.၀၀၆ ၀.၀၅၉ ၀.၀၆၅
၂၂ BENIN ၀.၁၀၅ ၀.၁၀၅ ၀.၄၂ ၀.၃၇၂ ၀.၇၉၂ ၁.၄၉၈ ၀.၇၈၁ ၂.၂၇၉ ၁.၀၂၃ ၀.၀၂၃ ၁.၀၄၆ ၆.၃၁၆ ၆.၃၁၆ ၅.၁၇ ၅.၁၇၀
၂၃ BERMUDA ၀.၂၁၆ ၀.၂၁၆ ၀.၀၄ ၀.၀၄
၂၅ BOLIVIA ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅ ၄.၀၂၂ ၄.၀၂၂ ၀.၀၁၃ ၂.၃၄၉ ၂.၃၆၁ ၂.၇၀၄ ၂.၇၀၄ ၀.၀၄၈ ၈.၃၇၁ ၈.၄၁၉ ၄.၆၉၁ ၄.၆၉၁
၂၆ BOSNIA AND HERZEGOVINA ၀.၂၉၆ ၀.၀၀၇ ၀.၃၀၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၂ ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၀.၀၀၂ ၀.၀၃၉ ၀.၀၄၁ ၀.၀၁၈ ၀.၀၁၈
၂၇ BOTSWANA ၀.၈၁၈ ၀.၈၁၈ ၂.၆၀၇ ၂.၆၀၇ ၀.၄၇၇ ၀.၄၇၇ ၀.၀၇၁ ၀.၀၇၁ ၀.၄၁၇ ၀.၀၃ ၀.၄၄၇ ၀.၁၄၉ ၀.၁၄၉ ၀.၁၃၀ ၀.၁၃၀
၂၉ BRAZIL ၁.၄၉၂ ၁၂.၄၇ ၁၃.၉၆၂ ၀.၈၃၆ ၅.၂ ၆.၀၃၆ ၀.၇၇၅ ၁၀.၀၈၈ ၁၀.၈၆၃ ၄.၃၀၇ ၁၄.၀၂၄ ၁၈.၃၃၁ ၂.၁၁၃ ၃၄.၃၀၅ ၃၆.၄၁၈ ၉.၃၆၈ ၁၅၀.၆၉၂ ၁၆၀.၀၆ ၂.၉၂၃ ၂၀၂.၈၇၇ ၂၀၅.၈ ၂.၂၇၅ ၅၁.၄၃၈ ၅၃.၇၁၃ ၅.၅၈၂ ၉၆.၀၁ ၁၀၁.၅၉၂ ၂.၆၀၉ ၂၂.၁၅၈ ၂၄.၇၆၇
၃၁ BRUNEI DARUSSALAM ၁.၃၂၆ ၀.၀၁၇ ၁.၃၄၃ ၀.၉၀၃ ၀.၉၀၃ ၄.၂၈၄ ၄.၂၈၄ ၀.၇၂၆ ၀.၀၂၃ ၀.၇၄၉ ၀.၃၁၈ ၀.၇၂၈ ၁.၀၄၆ ၀.၅၈ ၀.၂၇၇ ၀.၈၅၇ ၀.၂၀၅ ၀.၁၃၂ ၀.၃၃၇ ၀.၁၈၄ ၀.၀၇၉ ၀.၂၆၃ ၀.၂၃၃ ၀.၀၉၃ ၀.၃၂၆ ၀.၁၀၈ ၀.၀၁၉ ၀.၁၂၇
၃၂ BULGARIA ၁၀.၅၀၇ ၅.၂၅၇ ၁၅.၇၆၄ ၇.၂၂၃ ၁၆.၀၁၁ ၂၃.၂၃၄ ၇.၆၆၆ ၁၆.၈၆၇ ၂၄.၅၃၃ ၁၈.၉၆၂ ၃.၂၈၅ ၂၂.၂၄၇ ၂၂.၅၁ ၃. ၂၅.၅၁ ၁၇.၁၆၃ ၄.၇၄၂ ၂၁.၉၀၅ ၁.၇၄၃ ၄.၁ ၅.၈၄၃ ၁.၀၃၆ ၂.၄၂၈ ၃.၄၆၃ ၄.၉၃၅ ၄.၆၃၈ ၉.၅၇၃ ၁.၁၈၈ ၄.၄၂၉ ၅.၆၁၆
၃၃ BURKINA FASO ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၁၆၆ ၀.၁၆၆ ၀.၂၅၆ ၀.၂၅၆ ၄.၆၂ ၄.၆၂
၃၅ CAMBODIA ၀.၃၆၁ ၁.၁၁၆ ၁.၄၇၇ ၀.၀၂ ၀.၃၆၉ ၀.၃၈၉ ၀.၂၃၄ ၀.၇၁၂ ၀.၉၄၆ ၀.၄၆၂ ၀.၇၅၈ ၁.၂၂ ၀.၀၁၅ ၀.၈၈၃ ၀.၈၉၈ ၂.၆၅၃ ၀.၃၁၅ ၂.၉၆၈ ၃.၃၅၁ ၁.၆၇၈ ၅.၀၂၈ ၄.၉၂၆ ၁.၄၉၇ ၆.၄၂၃ ၁၂.၃၆၆ ၂.၇၅ ၁၅.၁၁၆ ၁၂.၃၈၁ ၁.၁၁၁ ၁၃.၄၉၁
၃၆ CAMEROON ၀.၆၀၈ ၂.၃၄၁ ၂.၉၄၉ ၀.၈၉၆ ၀.၈၉၆ ၀.၀၃၂ ၃.၃၁၁ ၃.၃၄၃ ၂.၉၇၂ ၂.၉၇၂ ၃.၁၈၆ ၃.၁၈၆ ၇.၄၅၅ ၀.၉၆၅ ၈.၄၂ ၁၄.၃၂၄ ၀.၃၁၇ ၁၄.၆၄၁ ၉.၈၈၃ ၀.၂၁၇ ၁၀.၁ ၃၅.၉၂၆ ၀.၀၇၇ ၃၆.၀၀၃ ၇.၂၀၉ ၀.၀၉၈ ၇.၃၀၇
၃၇ CANADA ၀.၀၄၄ ၄.၈၆ ၄.၉၀၄ ၂.၅၄၉ ၆.၅၀၈ ၉.၀၅၇ ၃.၃၁၁ ၈.၅၄၂ ၁၁.၈၅၃ ၄.၁၂၄ ၁၀.၉၃၇ ၁၅.၀၆၁ ၁၁.၀၇၃ ၁၃.၆၃၇ ၂၄.၇၁ ၄၀.၃၂ ၃၉.၉၁၄ ၈၀.၂၃၄ ၆၅.၃၁၆ ၄၈.၃၁၄ ၁၁၃.၆၂၉ ၄၄.၅၆ ၁၉.၂၃၃ ၆၃.၇၉၃ ၉၉.၂၄၅ ၄၈.၆၇၂ ၁၄၇.၉၁၆ ၃၃.၈၇၉ ၂၅.၅၄၁ ၅၉.၄၁၉
၃၈ CAPE VERDE ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၄ ၀.၀၇၈ ၀.၀၈၇ ၀.၁၆၅ ၀.၀၉၃ ၀.၀၉၃ ၀.၁၈၆ ၀.၀၀၄ ၀.၂၅၆ ၀.၂၆ ၀.၇၀၃ ၀.၇၀၃ ၀.၀၃၇ ၀.၀၃၇ ၀.၀၁၁ ၀.၀၀၈ ၀.၀၁၉ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၆
၄၁ CHAD ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉ ၀.၁၁၈ ၀.၀၁၂ ၀.၁၃ ၀.၂၇ ၀.၂၇ ၀.၀၁၈ ၀.၀၀၂ ၀.၀၂ ၀.၀၂၇ ၀.၀၁၉ ၀.၀၄၆ ၀.၄၄၅ ၀.၄၄၅ ၀.၈၄၃ ၀.၈၄၃
၄၂ CHILE ၀.၀၂ ၀.၈၄၆ ၀.၈၆၆ ၀.၂၆၄ ၀.၀၃ ၀.၂၉၄ ၀.၂၄၁ ၀.၂၅ ၀.၄၉၁ ၁.၅၁၃ ၁.၀၃၄ ၂.၅၄၇ ၀.၃၅ ၀.၉ ၁.၂၅ ၈.၄၅၇ ၀.၄၉၁ ၈.၉၄၈ ၅.၆၇ ၀.၉၇၆ ၆.၆၄၅ ၂.၉၂ ၀.၇၈၇ ၃.၇၀၇ ၁၃.၈၂၂ ၁.၁၃၅ ၁၄.၉၅၇ ၆.၁၁၁ ၀.၃၈၅ ၆.၄၉၇
၄၃ CHINA ၂၂၁၄.၂၉၈ ၂၇၈၆.၈၃၅ ၅၀၀၁.၁၃၃ ၂၂၃၈.၀၇ ၂၇၁၉.၄၈၆ ၄၉၅၇.၅၅၆ ၂၉၁၃.၆၇၃ ၄၁၁၉.၄၅၂ ၇၀၃၃.၁၂၅ ၄၆၉၂.၄၅၉ ၅၀၁၉.၆၂၉ ၉၇၁၂.၀၈၈ ၄၅၉၆.၉၆၁ ၆၃၉၅.၄၇၉ ၁၀၉၉၂.၄၄ ၅၀၅၅.၄၈၇ ၅၇၄၉.၂၈၆ ၁၀၈၀၄.၇၇၃ ၅၆၉၉.၃၄၈ ၆၀၈၆.၇၈ ၁၁၇၈၆.၁၂၈ ၂၉၀၄.၄၇၃ ၃၁၁၅.၂၅၈ ၆၀၁၉.၇၃၁ ၅၀၆၃.၅၃၈ ၆၃၃၀.၀၆၁ ၁၁၃၉၃.၆ ၂၄၆၅.၇၆၉ ၂၈၉၆.၂၉ ၅၃၆၂.၀၅၉
၄၄ CHRISTMAS ISLAND ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၇၇ ၀.၀၇၇ ၀.၀၄၄ ၀.၀၄၄ ၀.၀၈၅ ၀.၄၈ ၀.၅၆၅ ၀.၀၄၅ ၀.၀၄၅ ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၄
၄၆ COLOMBIA ၀.၃၀၃ ၀.၀၈၂ ၀.၃၈၅ ၂.၁၀၅ ၀.၁၃၇ ၂.၂၄၂ ၀.၁၁၆ ၀.၁၄၂ ၀.၂၅၈ ၁.၃၁၇ ၀.၀၂၈ ၁.၃၄၅ ၂.၂၄ ၀.၀၀၇ ၂.၂၄၇ ၁.၂၃၃ ၀.၀၇၃ ၁.၃၀၆ ၁.၄၄ ၅.၀၁၄ ၆.၄၅၄ ၂.၂၁၆ ၀.၀၀၅ ၂.၂၂ ၂.၈၁၁ ၀.၁၂၇ ၂.၉၃၈ ၂.၀၁၈ ၀.၀၀၆ ၂.၀၂၃
၄၈ CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၀.၅၁၇ ၀.၀၀၃ ၀.၅၂ ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၂.၂၈ ၀.၀၀၆ ၂.၂၈၆ ၀.၂၅၃ ၀.၂၅၃
၅၁ COSTA RICA ၀.၀၂၂ ၆.၃၇၂ ၆.၃၉၄ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၀၂၇ ၀.၀၂၇ ၀.၂၉၇ ၀.၂၉၇ ၀.၂၅၇ ၀.၀၂၆ ၀.၂၈၃ ၀.၁၃၃ ၀.၂၀၆ ၀.၃၃၉ ၀.၀၁၁ ၀.၀၉၉ ၀.၁၁ ၀.၀၄၄ ၀.၀၄၄ ၀.၀၈၈ ၀.၀၅၉ ၀.၁၅၉ ၀.၂၁၈ ၀.၀၆၈ ၀.၁၂၃ ၀.၁၉၁
၅၂ COTE D'IVOIRE ၉.၄၇၂ ၉.၄၇၂ ၀.၀၂၃ ၀.၀၂၃ ၂၂.၈၄၆ ၂၂.၈၄၆ ၇၄.၉၁၂ ၀.၂၆၈ ၇၅.၁၈ ၂၄.၆၅၂ ၂၄.၆၅၂ ၃၆.၅၀၅ ၃၆.၅၀၅ ၁၀.၆၅၈ ၁၀.၆၅၈
၅၃ CROATIA ၀.၀၅၇ ၀.၀၅၇ ၀.၀၀၄ ၀.၀၈၂ ၀.၀၈၆ ၀.၃၄၇ ၀.၀၃၄ ၀.၃၈၁ ၀.၂၁၈ ၀.၀၉၈ ၀.၃၁၆ ၁.၀၆၃ ၀.၁၄၇ ၁.၂၁ ၁.၉၈၈ ၁.၃၅၇ ၃.၃၄၅ ၂.၀၅၈ ၀.၆၆၇ ၂.၇၂၅ ၆.၀၇၆ ၀.၃၀၉ ၆.၃၈၅ ၂.၄၇၈ ၀.၅၆၁ ၃.၀၃၉
၅၄ CUBA ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃ ၀.၆၄၁ ၀.၆၄၁ ၀.၇၅၄ ၀.၇၅၄ ၀.၁၂၅ ၀.၁၂၅ ၀.၁၈၇ ၀.၁၄၂ ၀.၃၂၉ ၀.၀၄၅ ၀.၀၆၂ ၀.၁၀၇ ၀.၀၇၁ ၀.၀၇၁ ၀.၀၈၈ ၀.၀၈၈ ၀.၀၁၄ ၀.၀၈၇ ၀.၁၀၁ ၀.၂၀၀ ၀.၂၀၀
၅၅ CYPRUS ၀.၀၁၂ ၀.၅၀၉ ၀.၅၂၁ ၀.၃၃ ၀.၅၄၁ ၀.၈၇၁ ၀.၇၀၃ ၀.၇၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၅၁၅ ၀.၅၁၈ ၀.၀၂၆ ၀.၃၉၄ ၀.၄၂ ၀.၀၇၈ ၁.၀၃၈ ၁.၁၁၆ ၀.၁၄၅ ၂.၆၀၇ ၂.၇၅၂ ၀.၀၃၁ ၁.၇၉ ၁.၈၂၂ ၀.၁၂၁ ၃.၈၃၅ ၃.၉၅၆ ၀.၁၇၈ ၃.၀၄၂ ၃.၂၁၉
၅၇ CZECH REPUBLIC ၀.၁၈၆ ၀.၂၇၈ ၀.၄၆၄ ၀.၁၃၄ ၀.၁၃၄ ၀.၀၅၅ ၀.၀၀၁ ၀.၀၅၆ ၀.၇၉၅ ၀.၃၇၇ ၁.၁၇၂ ၁.၄၅၂ ၀.၅၇ ၂.၀၂၂ ၇.၃၂ ၃.၁၁၄ ၁၀.၄၃၄ ၁၄.၁၈ ၇.၈၄၅ ၂၂.၀၂၅ ၉.၆၇၃ ၂.၆၆၁ ၁၂.၃၃၄ ၁၇.၉၉ ၇.၀၃၉ ၂၅.၀၂၉ ၈.၈၃၇ ၃.၈၈၇ ၁၂.၇၂၄
၅၈ DENMARK ၁.၇၃၆ ၁.၁၃၃ ၂.၈၆၉ ၁.၆၀၄ ၂.၅၀၂ ၄.၁၀၆ ၂.၀၀၅ ၂၅.၁၄၅ ၂၇.၁၅ ၆.၁၂၄ ၉.၁၃၅ ၁၅.၂၅၉ ၃.၉၇၂ ၂၈.၄၄၄ ၃၂.၄၁၆ ၂၃.၂၇၇ ၃၅.၃၈ ၅၈.၆၅၇ ၉၅.၀၇ ၃၁.၉၅၈ ၁၂၇.၀၂၈ ၉၂.၁၅၁ ၃.၄၁၂ ၉၅.၅၆၄ ၁၃၄.၈၅၃ ၅.၅၈၁ ၁၄၀.၄၃၃ ၄၄.၈၅၂ ၃.၆၃၆ ၄၈.၄၈၈
၅၉ DJIBOUTI ၀.၀၇၇ ၀.၀၁၂ ၀.၀၈၉ ၀.၆၄၁ ၀.၆၄၁ ၁.၇၄၄ ၁.၇၄၄ ၂.၀၅၆ ၂.၀၅၆
၆၀ DOMINICA ၀.၄၅၅ ၀.၄၅၅ ၀.၁၇၁ ၀.၁၇၁ ၀.၀၄၆ ၀.၀၀၄ ၀.၀၅ ၀.၂၁၂ ၀.၁၆၈ ၀.၃၈ ၀.၀၀၉ ၀.၂၇၄ ၀.၂၈၃ ၀.၆၆၄ ၀.၀၈၁ ၀.၇၄၅ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၆၁ DOMINICAN REPUBLIC ၀.၁၅ ၀.၁၅ ၀.၀၁၈ ၀.၀၁၈ ၀.၁၅၅ ၀.၀၃၄ ၀.၁၈၉ ၀.၁၆၄ ၀.၀၃ ၀.၁၉၄ ၀.၀၇၇ ၀.၀၇၇ ၀.၂၃၃ ၀.၂၃၃ ၀.၂၆၅ ၀.၀၂၁ ၀.၂၈၇
၆၂ EAST TIMOR ၀.၁၁၅ ၀.၁၁၅ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၅ ၀.၄၁ ၀.၄၁ ၀.၉၇၉ ၀.၀၀၁ ၀.၉၈
၆၃ ECUADOR ၀.၂၄၈ ၀.၂၄၈ ၀.၂၁၃ ၀.၂၁၃ ၀.၅၃၉ ၀.၀၁ ၀.၅၄၉ ၀.၇၂ ၀.၀၉၂ ၀.၈၁၂ ၀.၁၂၉ ၀.၁၈၆ ၀.၃၁၅ ၉.၁၅၈ ၀.၂၈၂ ၉.၄၄ ၀.၀၀၉ ၀.၁၆၂ ၀.၁၇၁ ၀.၀၆၅ ၀.၀၆၅ ၀.၀၃၂ ၀.၀၀၅ ၀.၀၃၇
၆၄ EGYPT ၀.၄၅ ၀.၂၉၄ ၀.၇၄၄ ၀.၂၅၇ ၀.၁၇၈ ၀.၄၃၅ ၀.၁၇၃ ၀.၅၁၃ ၀.၆၈၆ ၀.၁၇၉ ၂.၂၆၂ ၂.၄၄၁ ၀.၂၅၆ ၀.၅၀၈ ၀.၇၆၄ ၀.၇၃ ၀.၆၇၈ ၁.၄၀၈ ၀.၁၂၃ ၁.၄၄၁ ၁.၅၆၃ ၂.၅၅၃ ၂.၃၂၆ ၄.၈၇၉ ၁.၁၉၃ ၆.၀၇ ၇.၂၆၃ ၀.၂၃၇ ၂.၇၉၂ ၃.၀၂၉
၆၆ ERITREA ၀.၁၃၉ ၀.၁၂၄ ၀.၂၆၃ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၆၇ ESTONIA ၀.၁၀၃ ၀.၁၀၃ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁ ၀.၃၆၁ ၀.၇၆၄ ၁.၁၂၅ ၀.၁၄၇ ၀.၆၀၄ ၀.၇၅၁ ၀.၀၅၃ ၀.၁၅၉ ၀.၂၁၂ ၀.၂၇၃ ၀.၈၃၄ ၁.၁၀၇ ၀.၀၉၆ ၀.၁၅၇ ၀.၂၅၂
၆၈ ETHIOPIA ၀.၁၇၄ ၀.၁၇၄ ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၇ ၀.၀၂ ၀.၀၇၃ ၀.၀၉၂ ၀.၂၇၁ ၀.၂၇၂ ၁.၀၁၇ ၀.၀၁၈ ၁.၀၃၅ ၀.၀၇၃ ၀.၀၇၃
၇၀ FAEROE ISLANDS ၀.၂၄၄ ၀.၂၄၄ ၀.၁၅၄ ၀.၀၀၃ ၀.၁၅၇ ၀.၀၂၆ ၀.၀၂၆ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈ ၀.၀၃၁ ၀.၀၃၁
၇၁ FIJI ၀.၀၇၆ ၀.၀၇၆ ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၀.၁၆၉ ၀.၁၆၉ ၀.၀၅၇ ၀.၀၁ ၀.၀၆၇ ၀.၀၄၆ ၀.၀၂၅ ၀.၀၇၁ ၀.၁၀၉ ၀.၁၀၉ ၁.၀၂၉ ၁.၀၂၉
၇၂ FINLAND ၀.၁၁၈ ၀.၀၀၁ ၀.၁၁၉ ၀.၅ ၁.၃၈၈ ၁.၈၈၈ ၀.၁၁၃ ၀.၃၈၃ ၀.၄၉၆ ၀.၃၇၈ ၀.၁၆၉ ၀.၅၄၇ ၀.၃၂၇ ၀.၀၇၄ ၀.၄၀၁ ၀.၉၅၃ ၂.၀၆၉ ၃.၀၂၂ ၃.၆၈၉ ၄.၆၃၇ ၈.၃၂၆ ၁.၇၉၃ ၄.၃၇၇ ၆.၁၇ ၅.၁၈၂ ၁၁.၃၃၅ ၁၆.၅၁၆ ၂.၉၅၁ ၂.၁၆၆ ၅.၁၁၇
၇၃ FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ၀.၆ ၀.၆ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၆ ၀.၀၁၇ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၉
၇၄ FRANCE ၁၅.၇၄၆ ၆၅.၃၃၉ ၈၁.၀၈၅ ၄.၁၀၆ ၄၃.၉၂ ၄၈.၀၂၆ ၄.၉၉၈ ၃၁.၁၅ ၃၆.၁၄၈ ၉.၆၃၈ ၅၂.၁၈၉ ၆၁.၈၂၇ ၁၉.၁၉၂ ၉၁.၁၇၁ ၁၁၀.၃၆၃ ၄၁.၆၃၁ ၁၃၄.၈၁၅ ၁၇၆.၄၄၆ ၇၅.၂၀၉ ၁၈၅.၆၇၃ ၂၆၀.၈၈၁ ၇၀.၆၇၈ ၁၅၈.၅၉၄ ၂၂၉.၂၇၂ ၁၈၄.၀၆၄ ၂၄၇.၆၉၄ ၄၃၁.၇၅၈ ၅၉.၀၈၃ ၁၁၀.၂၉၂ ၁၆၉.၃၇၆
၇၇ GABON ၀.၀၇၂ ၀.၀၇၂ ၀.၂၅၉ ၀.၂၅၉ ၀.၀၇ ၀.၀၇ ၀.၀၈၇ ၀.၀၈၇ ၀.၀၇ ၀.၀၇ ၀.၀၅၃ ၀.၀၅၃ ၀.၀၈၇ ၀.၀၈၇
၇၈ GAMBIA ၀.၃၀၉ ၀.၃၀၉ ၀.၆၉၃ ၀.၆၉၃ ၀.၀၉၁ ၂.၀၀၆ ၂.၀၉၇ ၁.၆၅၄ ၁.၆၅၄ ၃.၀၄၂ ၁.၄၇၇ ၄.၅၁၉ ၀.၇၀၉ ၀.၀၇၇ ၀.၇၈၆ ၀.၂၃၅ ၀.၀၉၂ ၀.၃၂၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃ ၀.၈၃၅ ၀.၈၃၅
၇၉ GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF ၄၂.၃၂၉ ၉၅.၁၁၉ ၁၃၇.၄၄၈ ၄၂.၉၇၉ ၁၄၄.၅၅၃ ၁၈၇.၅၃၂ ၄၀.၃၆၁ ၈၃.၂၃၆ ၁၂၃.၅၉၇ ၆၈.၀၉၄ ၇၉.၀၉၁ ၁၄၇.၁၈၅ ၈၅.၀၄ ၆၈.၇၄၁ ၁၅၃.၇၈၁ ၂၁၉.၇၄၂ ၁၂၂.၃၆၇ ၃၄၂.၁၀၉ ၃၈၀.၀၆ ၂၀၃.၉၅၂ ၅၈၄.၀၁၂ ၂၈၂.၈၂၂ ၉၀.၄၇ ၃၇၃.၂၉၂ ၆၂၄.၆၇၅ ၁၉၆.၈၅၄ ၈၂၁.၅၂၉ ၂၇၂.၀၂၃ ၈၅.၈၅၃ ၃၅၇.၈၇၆
၈၀ GHANA ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၂၅၃ ၀.၀၁၉ ၀.၂၇၂ ၃.၆၀၂ ၀.၀၀၃ ၃.၆၀၅ ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၁၄.၁၈၅ ၁၄.၁၈၅ ၁.၀၂၆ ၀.၀၀၀ ၁.၀၂၆
၈၂ GREECE ၉.၇၉ ၁.၂၀၄ ၁၀.၉၉၄ ၂.၈၆ ၀.၃၈၃ ၃.၂၄၃ ၁၄.၂၇၂ ၄.၉၃၂ ၁၉.၂၀၄ ၀.၈၁၆ ၃.၅၄၂ ၄.၃၅၈ ၇.၀၃ ၃.၅၀၇ ၁၀.၅၃၇ ၁.၀၆၆ ၁.၅၀၇ ၂.၅၇၃ ၅.၈၂၇ ၀.၅၄၆ ၆.၃၇၃ ၃.၅၂၅ ၀.၉၀၉ ၄.၄၃၄ ၈.၈၉၄ ၀.၃၁၇ ၉.၂၁ ၃.၃၄ ၀.၂၀၆ ၃.၅၄၆
၈၄ GRENADA ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၅၈ ၀.၀၅၈ ၀.၀၂၇ ၀.၀၂၇ ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၄ ၀.၀၃၂ ၀.၂၇၃ ၀.၃၀၅ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
၈၅ GUADELOUPE ၇.၈၇၈ ၀.၀၂ ၇.၈၉၈ ၁၈.၂၇၅ ၁၈.၂၇၅ ၃.၆၄ ၃.၆၄ ၀.၂၅၃ ၀.၁၈၇ ၀.၄၄ ၂.၀၄၉ ၀.၀၅၆ ၂.၁၀၅ ၀.၀၃၄ ၀.၃၆၇ ၀.၄၀၁ ၀.၂၁၅ ၀.၂၁၅ ၀.၂၃၁ ၀.၂၃၁ ၀.၈၉၆ ၀.၈၉၆ ၀.၄၅၀ ၀.၄၅၀
၈၇ GUATEMALA ၀.၀၆၅ ၀.၀၆၅ ၀.၀၈၂ ၀.၃၅၃ ၀.၄၃၅ ၀.၁၃၇ ၀.၃ ၀.၄၃၇ ၀.၁၇၈ ၀.၁၇၈ ၀.၁၉၂ ၀.၁၉၂ ၀.၀၇ ၆.၇၈၉ ၆.၈၅၉ ၀.၀၁၁ ၁၈.၂၆၁ ၁၈.၂၇၂ ၁.၆၁၇ ၁.၆၁၇ ၀.၁၁၈ ၀.၅၀၇ ၀.၆၂၅ ၀.၀၆၇ ၀.၃၄၁ ၀.၄၀၈
၈၈ GUINEA ၀.၀၉၅ ၀.၀၉၅ ၀.၁၀၆ ၀.၁၀၆ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၅၃ ၀.၀၅၃ ၁၅.၁၂ ၀.၀၀၈ ၁၅.၁၂၈ ၄၇.၇၁၆ ၀.၀၃၅ ၄၇.၇၅ ၁၅.၉၇၇ ၀.၀၀၁ ၁၅.၉၇၇ ၁၉.၅၈၇ ၀.၀၀၃ ၁၉.၅၉ ၁၇.၈၆၅ ၀.၀၀၆ ၁၇.၈၇၁
၉၀ GUYANA ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၄၃ ၀.၀၄၃
၉၁ HAITI ၀.၀၂၇ ၀.၀၂၇ ၀.၀၄၄ ၀.၀၄၄ ၀.၁၇၄ ၀.၁၇၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၁၄၃ ၀.၀၂၇ ၀.၁၇ ၀.၀၁၆ ၀.၀၁၆
၉၂ HOLY SEE ၀.၁၁၁ ၀.၁၁၁ ၀.၁၆၁ ၀.၁၆၁ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈ ၁.၀၄၂ ၁.၀၄၂ ၄၉.၁၇၃ ၄၉.၁၇၃ ၁၉.၅၅၂ ၁၉.၅၅၂ ၇.၅၈ ၇.၅၈ ၀.၅၅၁ ၀.၅၅၁
၉၃ HONDURAS ၀.၃၇ ၀.၃၇ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၈၉၇ ၀.၈၉၇ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂
၉၄ HONG KONG, CHINA ၄၁.၄၇၄ ၉.၇၁၅ ၅၁.၁၈၉ ၁၂.၇၂၆ ၁၄.၅၅၆ ၂၇.၂၈၂ ၄၈၉.၁၀၃ ၁၃.၆၉၂ ၅၀၂.၇၉၅ ၂၈၈.၅၂၇ ၅၅.၃၆၂ ၃၄၃.၈၈၉ ၂၈၂.၈၀၈ ၃၃.၅၅၇ ၃၁၆.၃၆၅ ၂၀၄.၁၆၅ ၃၅.၃၀၃ ၂၃၉.၄၆၈ ၃၆၃.၀၄၁ ၂၂.၅၈၈ ၃၈၅.၆၃ ၂၃၀.၀၅၇ ၈.၅၅၃ ၂၃၈.၆၁ ၂၁၄.၉၅၄ ၁၇.၄၄၁ ၂၃၂.၃၉၅ ၁၆၂.၁၀၄ ၃.၀၉၆ ၁၆၅.၂
၉၅ HUNGARY ၀.၀၁ ၀.၀၀၅ ၀.၀၁၅ ၀.၃၃၆ ၀.၁၀၂ ၀.၄၃၈ ၀.၁၅၃ ၀.၂၃၈ ၀.၃၉၁ ၀.၅၂၉ ၀.၈၃၉ ၁.၃၆၈ ၁.၀၉၇ ၆.၈၁၁ ၇.၉၀၈ ၁.၇၇၇ ၂၉.၀၀၆ ၃၀.၇၈၃ ၁.၉၈၁ ၃.၈၀၅ ၅.၇၈၆ ၁.၇၈၆ ၁၁.၃၇၆ ၁၃.၁၆၃ ၁.၀၂၈ ၃.၄၀၈ ၄.၄၃၅
၉၆ ICELAND ၁.၁၁၃ ၁.၁၁၃ ၀.၀၀၂ ၀.၃၉၃ ၀.၃၉၅ ၀.၅၆၄ ၀.၅၆၄ ၀.၂၄၇ ၃.၁၃၃ ၃.၃၈ ၀.၅၇၄ ၀.၈၄၃ ၁.၄၁၇ ၀.၀၃၇ ၀.၁၅၄ ၀.၁၉၁ ၀.၁၀၉ ၀.၀၅ ၀.၁၅၉ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၇၇ ၀.၀၇၇ ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၁
၉၇ INDIA ၁၀၄၅.၉၈၄ ၃၂၅.၃၈၂ ၁၃၇၁.၃၆၆ ၁၀၁၈.၆၉၃ ၃၀၁.၇၀၄ ၁၃၂၀.၃၉၇ ၁၁၄၃.၃၉၉ ၄၉၃.၅၃၂ ၁၆၃၆.၉၃၁ ၇၄၅.၈၀၄ ၅၉၄.၇၇၇ ၁၃၄၀.၅၈၁ ၉၀၄.၁၆၃ ၈၀၇.၃၅၅ ၁၇၁၁.၅၁၈ ၉၄၃.၄၇၆ ၉၉၉.၆၈၈ ၁၉၄၃.၁၆၄ ၆၀၇.၂၅၃ ၈၆၀.၉၄၂ ၁၄၆၈.၁၉၅ ၂၉၂.၀၃၂ ၅၀၈.၄၀၅ ၈၀၀.၄၃၇ ၆၈၂.၇၈ ၇၆၁.၂၂၃ ၁၄၄၄.၀၀၄ ၃၅၇.၂၁၁ ၃၀၄.၃၈ ၆၆၁.၅၉၂
၉၈ INDONESIA ၄၀.၉၃၆ ၄၃၁.၈၂ ၄၇၂.၇၅၆ ၃၁.၅၃၈ ၁၉၅.၂၂၉ ၂၂၆.၇၆၇ ၆၀.၀၄ ၄၃၈.၈၁၆ ၄၉၈.၈၅၆ ၈၆.၀၄၅ ၅၅၀.၅၁၃ ၆၃၆.၅၅၈ ၁၃၉.၈၃၆ ၆၀၁.၉၅၉ ၇၄၁.၇၉၅ ၁၂၅.၀၄၆ ၇၀၂.၁၆ ၈၂၇.၂၀၆ ၁၂၃.၉၀၉ ၉၀၁.၃၆၉ ၁၀၂၅.၂၇၈ ၆၂.၈၂၂ ၄၆၀.၃၂၅ ၅၂၃.၁၄၇ ၁၃၈.၀၂၂ ၉၀၅.၄၉၅ ၁၀၄၃.၅၁၇ ၇၆.၃၁၃ ၄၃၂.၀၄၅ ၅၀၈.၃၅၇
၉၉ IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) ၀.၃၃၁ ၄၀.၈၈ ၄၁.၂၁၁ ၀.၀၇၉ ၃၀.၀၆၂ ၃၀.၁၄၁ ၀.၀၉၄ ၂၀.၇၀၆ ၂၀.၈ ၂.၀၈၁ ၂၉.၂၅၈ ၃၁.၃၃၉ ၁.၃၀၆ ၃၇.၇၄၁ ၃၉.၀၄၇ ၁.၆၇၁ ၃၃.၅၁၃ ၃၅.၁၈၄ ၀.၆၉၂ ၅၀.၁၀၁ ၅၀.၇၉၃ ၀.၂၄၈ ၃၄.၃၁၁ ၃၄.၅၅၉ ၀.၂၀၄ ၅၃.၀၇၃ ၅၃.၂၇၇ ၀.၀၆ ၈.၂၅၀ ၈.၃၁၀
၁၀၀ IRAQ ၀.၂၅၄ ၀.၂၅၄ ၂.၇၀၉ ၂.၇၀၉ ၀.၉၁၇ ၀.၉၁၇ ၀.၀၇၁ ၀.၀၇၁ ၂.၆၁၆ ၂.၆၁၆ ၅.၄၀၉ ၅.၄၀၉ ၄.၁၃၅ ၀.၀၀၁ ၄.၁၃၆ ၈.၉၇၁ ၈.၉၇၁ ၂.၄၆၆ ၂.၄၆၆
၁၀၁ IRELAND ၀.၀၈၂ ၀.၃၄၂ ၀.၄၂၄ ၀.၄၃၂ ၀.၂၁၉ ၀.၆၅၁ ၂.၀၃၉ ၀.၀၉၂ ၂.၁၃၁ ၂.၁၈၇ ၁.၆၆၆ ၃.၈၅၃ ၂.၃၉၃ ၂.၈၅ ၅.၂၄၃ ၈.၀၈၉ ၇.၂၈၇ ၁၅.၃၇၆ ၁၀.၇၆၄ ၁၆.၂၂၈ ၂၆.၉၉၂ ၅၂.၈၇၆ ၇.၃၈၇ ၆၀.၂၆၃ ၃၄.၀၃၈ ၁၁.၃၂၃ ၄၅.၃၆ ၁၁.၉၈၉ ၆.၂၀၇ ၁၈.၁၉၅
၁၀၃ ISRAEL ၀.၁၈၇ ၀.၁၀၉ ၀.၂၉၆ ၀.၂၈၇ ၀.၁၆၆ ၀.၄၅၃ ၀.၆၇၈ ၀.၅၂၅ ၁.၂၀၃ ၂.၄၄၄ ၁.၈၉ ၄.၃၃၄ ၄.၃၉၉ ၆.၂၅၉ ၁၀.၆၅၈ ၅.၈၁၃ ၁.၁၄၁ ၆.၉၅၄ ၄.၆၆၇ ၄.၀၄၄ ၈.၇၁၁ ၃.၉၄၈ ၂.၃၀၃ ၆.၂၅ ၇.၆၂၈ ၂.၁၄၂ ၉.၇၇ ၃.၄၄၃ ၁.၃၀၉ ၄.၇၅၁
၁၀၄ ITALY ၆.၈၉၅ ၁၆.၆၂၇ ၂၃.၅၂၂ ၁၄.၁၁၈ ၁၃.၇၀၁ ၂၇.၈၁၉ ၁၆.၇၈၃ ၁၀၇.၉၁၆ ၁၂၄.၆၉၉ ၁၉.၈၇၈ ၉၃.၆၇၈ ၁၁၃.၅၅၆ ၂၂.၉၈ ၅၀.၁၅၂ ၇၃.၁၃၂ ၅၁.၁၀၇ ၈၅.၆၆၇ ၁၃၆.၇၇၄ ၁၀၆.၀၁၅ ၁၁၁.၄၄၁ ၂၁၇.၄၅၇ ၁၀၅.၄၇၄ ၇၀.၄၆၂ ၁၇၅.၉၃၆ ၂၀၇.၇၄၈ ၈၃.၁၆၅ ၂၉၀.၉၁၃ ၈၄.၆၀၅ ၁၀၉.၉၆၅ ၁၉၄.၅၇
၁၀၆ JAMAICA ၀.၀၆ ၀.၀၆ ၀.၀၆၈ ၀.၀၀၅ ၀.၀၇၃ ၀.၃၅၄ ၀.၂၀၄ ၀.၅၅၈ ၀.၃၅ ၀.၀၂၂ ၀.၃၇၂ ၀.၁၀၈ ၀.၃၂၈ ၀.၄၃၆ ၀.၃၄ ၀.၀၂၆ ၀.၃၆၆ ၀.၀၀၉ ၀.၀၁၅ ၀.၀၂၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃
၁၀၇ JAPAN ၃၂၀.၂၀၁ ၅၀၂.၁၇၃ ၈၂၂.၃၇၄ ၄၀၆.၄၈၇ ၁၀၉၁.၇၃၂ ၁၄၉၈.၂၁၉ ၅၁၃.၂၄၅ ၁၂၉၆.၂၄၁ ၁၈၀၉.၄၈၆ ၅၅၅.၆၇၈ ၁၇၄၉.၃၈ ၂၃၀၅.၀၅၈ ၃၉၃.၇၅၃ ၁၄၅၂.၂၂၅ ၁၈၄၅.၉၇၈ ၇၈၄.၂၅၇ ၁၂၄၇.၅၃၄ ၂၀၃၁.၇၉၁ ၉၅၆.၀၃၂ ၉၆၅.၈၇၂ ၁၉၂၁.၉၀၄ ၇၆၀.၉၇၆ ၃၃၄.၈၆၈ ၁၀၉၅.၈၄၄ ၁၄၁၅.၇၁၁ ၄၈၀.၅၇၂ ၁၈၉၆.၂၈၃ ၆၂၁.၀၃၂ ၂၃၄.၃၆၉ ၈၅၅.၄၀၀
၁၀၈ JORDAN ၀.၂၀၈ ၀.၂၉ ၀.၄၉၈ ၀.၁၂၆ ၀.၅၄၇ ၀.၆၇၃ ၀.၃၉၄ ၀.၃၉၄ ၀.၁၉၁ ၀.၅၇၅ ၀.၇၆၆ ၀.၄၄၆ ၀.၄၄၆ ၀.၂၄၉ ၁.၄၃၃ ၁.၆၈၂ ၀.၃၈၆ ၃.၆၆၃ ၄.၀၄၉ ၀.၂၉၆ ၁.၂၉၃ ၁.၅၈၉ ၀.၁၉ ၂.၇၇၈ ၂.၉၆၉ ၀.၀၅ ၁.၅၂၀ ၁.၅၇၀
၁၁၀ KENYA ၀.၀၄၅ ၀.၂၂၅ ၀.၂၇ ၀.၁၀၉ ၀.၄၄၄ ၀.၅၅၃ ၀.၇၇၄ ၀.၇၀၅ ၁.၄၇၉ ၀.၈၉၈ ၀.၅၈၉ ၁.၄၈၇ ၂.၁၆၆ ၀.၃၀၃ ၂.၄၆၉ ၀.၂၆၉ ၀.၆၅ ၀.၉၁၉ ၀.၄၁၆ ၀.၅၁၇ ၀.၉၃၂ ၀.၀၁၃ ၀.၅၅၁ ၀.၅၆၄ ၀.၇၄၉ ၂.၀၄၅ ၂.၇၉၅ ၆.၃၆၅ ၀.၁၉၄ ၆.၅၅၉
၁၁၁ KIRIBATI ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈ ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄ ၀.၀၅၃ ၀.၄၅ ၀.၅၀၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၁၁၂ KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF ၀.၀၇၅ ၀.၀၀၉ ၀.၀၈၄ ၀.၂၉၄ ၀.၀၃၈ ၀.၃၃၂ ၁၆.၄၈၈ ၀.၅၃၉ ၁၇.၀၂၇ ၂.၇၉ ၁.၂၃၆ ၄.၀၂၆ ၀.၅၄၅ ၁.၂၁ ၁.၇၅၅ ၁.၀၄၆ ၁.၂၈၂ ၂.၃၂၈ ၀.၁၅၇ ၀.၁၅၇ ၀.၀၄၀ ၀.၀၄၀ ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၀.၄၅၃ ၀.၄၅၃
၁၁၃ KOREA, REPUBLIC OF ၂၁၄.၈၂၁ ၄၅၁.၉၂၆ ၆၆၆.၇၄၇ ၂၈၀.၇၆၆ ၃၄၃.၂၁၈ ၆၂၃.၉၈၄ ၃၅၂.၉၁၈ ၁၂၁၇.၉၈ ၁၅၇၀.၈၉၈ ၃၆၉.၆၀၄ ၄၉၂.၉၈၉ ၈၆၂.၅၉၃ ၂၅၉.၉၄၅ ၃၉၆.၅၉၁ ၆၅၆.၅၃၆ ၃၄၂.၄၃၂ ၅၂၃.၆၄၃ ၈၆၆.၀၇၅ ၃၀၃.၂၅၇ ၄၉၅.၁၇၂ ၇၉၈.၄၂၉ ၂၃၀.၈၄ ၁၉၃.၉၁၆ ၄၂၄.၇၅၅ ၅၂၃.၀၁၈ ၄၅၃.၃၆၆ ၉၇၆.၃၈၄ ၂၂၀.၆၉၅ ၁၉၇.၀၁၃ ၄၁၇.၇၀၈
၁၁၄ KUWAIT ၄၈.၄၇၇ ၁.၃၃၇ ၄၉.၈၁၄ ၅၁.၅၆၅ ၀.၀၀၆ ၅၁.၅၇၁ ၁၆.၁၉၇ ၀.၂၅၄ ၁၆.၄၅၁ ၁၉.၈၇၇ ၀.၉၆ ၂၀.၈၃၇ ၁၇.၀၄ ၀.၁၁၉ ၁၇.၁၅၉ ၇.၅၂ ၀.၂၅၃ ၇.၇၇၃ ၈.၅၃၁ ၀.၈၇၂ ၉.၄၀၄ ၄.၂၉၈ ၁.၉၀၁ ၆.၁၉၉ ၅.၃၆၉ ၁.၇၆၃ ၇.၁၃၂ ၂.၃၅၉ ၀.၇၅၈ ၃.၁၁၇
၁၁၅ KYRGYZ REPUBLIC ၀.၀၂ ၀.၀၂ ၀.၁၂၄ ၀.၁၂၄
၁၁၆ KYRGYZSTAN ၀.၁၉၄ ၀.၁၉၄ ၀.၁၄ ၀.၁၄ ၀.၂၃၆ ၀.၂၃၆ ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅
၁၁၇ LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC ၀.၀၂၇ ၀.၀၂၇ ၀.၁၄၈ ၀.၂၂၄ ၀.၃၇၂ ၀.၃၉၄ ၀.၀၀၇ ၀.၄၀၁ ၀.၆၈၅ ၀.၀၂၄ ၀.၇၀၉ ၀.၃၉၅ ၀.၁၀၁ ၀.၄၉၆ ၀.၀၄၁ ၀.၄၀၉ ၀.၄၅ ၀.၀၈၃ ၁.၄၆၄ ၁.၅၄၇ ၀.၀၀၉ ၀.၄၉၈ ၀.၅၀၇ ၀.၂၄၁ ၁.၄၇၃ ၁.၇၁၄ ၀.၄၆၈ ၀.၅၅ ၁.၀၁၈
၁၁၈ LATVIA ၀.၂၀၆ ၀.၂၀၆ ၅.၃၀၅ ၅.၃၀၅ ၀.၁၂၉ ၀.၁၂၉ ၁.၈၃၄ ၁.၈၃၄ ၀.၁၂၂ ၀.၁၂၂ ၀.၂၇၇ ၀.၀၆၇ ၀.၃၄၄ ၀.၅၇ ၀.၄၀၈ ၀.၉၇၈ ၁.၀၉၁ ၀.၃၀၃ ၁.၃၉၄ ၁.၄၀၃ ၀.၃၁၈ ၁.၇၂၁ ၀.၂၃၂ ၀.၁၃၃ ၀.၃၆၅
၁၁၉ LEBANON ၀.၀၆၇ ၀.၀၆၇ ၀.၀၀၂ ၀.၀၃၆ ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၉ ၀.၂၅၄ ၀.၃၄၄ ၀.၀၅၆ ၀.၀၅၆ ၀.၀၉၁ ၂.၁၇၆ ၂.၂၆၇ ၀.၅၂၈ ၀.၂၇၄ ၀.၈၀၂ ၀.၀၄၉ ၀.၀၀၂ ၀.၀၅၁ ၁.၉၀၁ ၀.၆၆၇ ၂.၅၆၈ ၀.၉၃၈ ၀.၅၆၇ ၁.၅၀၅
၁၂၁ LIBERIA ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၃၇ ၀.၀၀၅ ၀.၀၄၂ ၀.၀၃ ၀.၈၁၉ ၀.၈၄၉ ၀.၇၃၂ ၀.၇၃၂ ၀.၂၄၂ ၀.၀၉၇ ၀.၃၃၉ ၀.၀၂၈ ၀.၀၁ ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၈ ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
၁၂၃ LIECHTENSTEIN ၀.၀၅၇ ၀.၀၅၇ ၀.၄၄၁ ၀.၄၄၁ ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၄ ၀.၀၇၈ ၀.၉၁၂ ၀.၉၉ ၂.၀၄၉ ၂.၀၄၉ ၂.၀၅၄ ၂.၀၅၄ ၀.၈၄၆ ၀.၈၄၆ ၀.၂၇၁ ၀.၂၇၁
၁၂၄ LITHUANIA ၀.၁၅၁ ၀.၁၅၁ ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၃၅၆ ၀.၀၅၅ ၀.၄၁၁ ၁.၀၈၅ ၀.၃၈၅ ၁.၄၇ ၂.၆၅၉ ၀.၄၁၄ ၃.၀၇၄ ၁.၉၂၄ ၀.၄၉၁ ၂.၄၁၅ ၃.၄၃၁ ၀.၃၇၄ ၃.၈၀၅ ၂.၄၈၆ ၀.၄၂၂ ၂.၉၀၈
၁၂၅ LUXEMBOURG ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၂ ၀.၀၂၈ ၀.၀၃ ၀.၀၅၈ ၀.၅၃၅ ၀.၅၉၂ ၁.၆၅၈ ၀.၀၆၅ ၁.၇၂၃ ၃.၁၆၅ ၀.၀၈၁ ၃.၂၄၅ ၀.၁၉၅ ၀.၀၀၈ ၀.၂၀၃
၁၂၆ MACAU, CHINA ၀.၀၁၈ ၀.၂၀၇ ၀.၂၂၅ ၀.၀၀၁ ၀.၂၅ ၀.၂၅၁ ၀.၁၆၅ ၀.၀၉၅ ၀.၂၆ ၀.၈၂၂ ၁.၆၉၃ ၂.၅၁၅ ၀.၀၀၃ ၀.၇၃၅ ၀.၇၃၈ ၀.၀၂၆ ၀.၄၃၉ ၀.၄၆၅ ၀.၆၀၁ ၀.၈၀၇ ၁.၄၀၈ ၀.၁၆၄ ၀.၃၄၈ ၀.၅၁၂
၁၂၇ MADAGASCAR ၀.၄ ၀.၄ ၀.၀၂ ၀.၀၂ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၁၁၃ ၀.၁၁၃ ၅.၃၁၁ ၅.၃၁၁ ၂၉.၉၁၅ ၀.၁၁၂ ၃၀.၀၂၇ ၀.၁၆၀ ၀.၁၆၄ ၀.၃၂၄ ၂၇.၅၀၂ ၀.၆၆၉ ၂၈.၁၇၁ ၃၃.၄၂၁ ၀.၂၂၇ ၃၃.၆၄၉
၁၂၉ MALAYSIA ၁၅၂.၀၃၈ ၃၀၃.၄၁ ၄၅၅.၄၄၈ ၉၇.၉၇၇ ၃၆၀.၉၀၂ ၄၅၈.၈၇၉ ၁၀၈.၈၆၈ ၈၃၉.၆၉၂ ၉၄၈.၅၆ ၂၆၄.၉၉၉ ၇၄၃.၉၇၈ ၁၀၀၈.၉၇၇ ၁၆၁.၃၂ ၅၈၈.၇၂၂ ၇၅၀.၀၄၂ ၁၅၉.၀၀၉ ၈၂၁.၃၆၉ ၉၈၀.၃၇၈ ၂၂၂.၅၄၇ ၈၆၇.၂၂၇ ၁၀၈၉.၇၇၄ ၁၂၁.၉၇၉ ၄၇၈.၄၄၈ ၆၀၀.၄၂၆ ၁၉၄.၇၇၂ ၈၀၅.၉၈၇ ၁၀၀၀.၇၅၉ ၉၉.၄၈၃ ၅၂၇.၅၃၉ ၆၂၇.၀၂၃
၁၃၁ MALI ၀.၈၂၅ ၀.၈၂၅ ၀.၀၄၁ ၀.၁၁၉ ၀.၁၆ ၀.၃၁၃ ၀.၃၁၃ ၀.၆၆၆ ၀.၆၆၆ ၄.၃၃၆ ၄.၃၃၆ ၀.၁၈၈ ၀.၁၈၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၇၃ ၀.၀၇၃ ၁.၁၀၇ ၀.၀၂၆ ၁.၁၃၃ ၂.၁၅၈ ၂.၁၅၈
၁၃၂ MALTA ၀.၁၆၁ ၀.၁၆၁ ၀.၁၄၉ ၀.၁၄၉ ၀.၄၀၇ ၀.၄၀၇ ၀.၂၂၃ ၀.၂၂၃ ၀.၀၂ ၀.၁၆၈ ၀.၁၈၈ ၀.၀၁၅ ၀.၂၀၆ ၀.၂၂၁ ၀.၀၄၉ ၀.၀၄၉ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၂ ၀.၀၈၂ ၀.၀၉၅ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇
၁၃၃ MARSHALL ISLANDS ၀.၁၁ ၀.၁၁ ၀.၁၆၂ ၀.၁၆၂ ၀.၀၇ ၀.၁၁၃ ၀.၁၈၃ ၀.၀၅၄ ၀.၀၅၄ ၀.၁၂၇ ၀.၁၂၇
၁၃၅ MAURITANIA ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၅၃၁ ၀.၅၃၁ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၀.၂၅၃ ၀.၂၅၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၈၁ ၀.၀၈၁
၁၃၆ MAURITIUS ၀.၁၆၄ ၀.၁၆၄ ၀.၀၂ ၀.၂၃၇ ၀.၂၅၇ ၀.၀၁၆ ၀.၀၁၆ ၀.၁၅၃ ၀.၀၄၄ ၀.၁၉၇ ၀.၂၃၆ ၀.၄၅၈ ၀.၆၉၄ ၀.၀၇၇ ၀.၃၂၆ ၀.၄၀၃ ၀.၂၅၇ ၀.၀၂၁ ၀.၂၇၈ ၀.၁၇၂ ၀.၀၂၉ ၀.၂၀၁ ၀.၅၃၈ ၀.၀၄၉ ၀.၅၈၆ ၀.၀၃၄ ၀.၀၁၄ ၀.၀၄၈
၁၃၇ MAYOTTE ၀.၁၈၅ ၀.၁၈၅ ၀.၀၃၆ ၀.၅၆ ၀.၅၉၆ ၀.၄၀၄ ၀.၄၀၄ ၀.၁၀၂ ၀.၁၀၂ ၀.၀၉၇ ၀.၀၉၇
၁၃၈ MEXICO ၀.၉၃၄ ၀.၁၆၂ ၁.၀၉၆ ၂.၉၅၇ ၀.၂၁၅ ၃.၁၇၂ ၁၀.၂၁၉ ၂.၀၆၂ ၁၂.၂၈၁ ၁၃.၀၀၆ ၀.၄၃၆ ၁၃.၄၄၂ ၄၃.၀၂ ၀.၄၄၇ ၄၃.၄၆၇ ၉.၈၂၉ ၇.၉၉၂ ၁၇.၈၂၁ ၈.၈၀၅ ၁၇.၆၈ ၂၆.၄၈၅ ၁၀.၄၇၀ ၇.၄၉၅ ၁၇.၉၆၅ ၂၂.၆၀၃ ၁၂.၄၁၅ ၃၅.၀၁၈ ၆.၉၀၇ ၃.၆၇၇ ၁၀.၅၈၃
၁၃၉ MOLDOVA ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၄ ၀.၆၃၄ ၀.၆၃၈ ၀.၅၅၈ ၀.၅၀၉ ၁.၀၆၇ ၄.၆၇၇ ၄.၆၇၇ ၁၄.၁၁၃ ၁၄.၁၁၃ ၂.၉၅၆ ၂.၉၅၆ ၄.၃၂၇ ၄.၃၂၇ ၀.၉၃၁ ၁.၂၆၆ ၂.၁၉၇
၁၄၀ MONACO ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉ ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁ ၀.၀၁၆ ၀.၀၁၆ ၀.၀၃၈ ၀.၀၂၃ ၀.၀၆၁ ၀.၀၃၄ ၀.၀၁၁ ၀.၀၄၅
၁၄၁ MONGOLIA ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁ ၀.၁၃ ၀.၁၃ ၀.၃၆၈ ၀.၃၆၈ ၀.၀၁၅ ၀.၀၂၅ ၀.၀၄ ၀.၀၅၄ ၀.၀၁၂ ၀.၀၆၇ ၀.၂၉၂ ၀.၀၀၂ ၀.၂၉၄ ၀.၀၈၂ ၀.၀၀၀ ၀.၀၈၂
၁၄၃ MONTSERRAT ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၉ ၀.၀၁ ၀.၀၁၉ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆
၁၄၄ MOROCCO ၀.၀၄၇ ၁.၀၃၈ ၁.၀၈၅ ၀.၂၃၇ ၀.၂၀၈ ၀.၄၄၅ ၀.၀၈၁ ၀.၀၈၁ ၀.၃၀၉ ၀.၄၂၇ ၀.၇၃၆ ၀.၂၅၇ ၁.၄၃၉ ၁.၆၉၆ ၀.၂၆၃ ၄.၇၃၉ ၅.၀၀၂ ၀.၉၆ ၄.၀၅၂ ၅.၀၁၂ ၀.၃၇၂ ၀.၁၅ ၀.၅၂၃ ၀.၉၅၈ ၀.၆၃၇ ၁.၅၉၅ ၀.၅၁၂ ၀.၀၈၈ ၀.၆
၁၄၅ MOZAMBIQUE ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅ ၀.၂၂၄ ၀.၂၂၄ ၀.၁၀၉ ၀.၁၀၉ ၀.၂၁၈ ၀.၂၁၈ ၈.၆၄၄ ၁၂.၀၆၄ ၂၀.၇၀၈ ၀.၀၇၂ ၀.၀၇၂ ၁.၆၈၀ ၁၅.၀၆၁ ၁၆.၇၄၁ ၁၂.၀၇၂ ၁၂.၀၇၂
၁၄၆ NAMIBIA ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈ ၀.၁၆၂ ၀.၁၆၂ ၀.၀၆ ၀.၀၆ ၀.၀၀၁ ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၂ ၀.၅၄၃ ၀.၅၄၃ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၁၅ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၁၄၇ NAURU ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၇၂ ၀.၀၇၂ ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅ ၀.၀၅၅ ၀.၀၅ ၀.၁၀၅ ၀.၁၃၇ ၀.၁၃၇ ၀.၁၀၃ ၀.၁၀၃
၁၄၈ NEPAL ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၅ ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃ ၀.၁၀၁ ၀.၀၁ ၀.၁၁၁ ၀.၀၈၄ ၀.၁၉၅ ၀.၂၇၉ ၀.၆၄၇ ၀.၀၁၉ ၀.၆၆၆ ၀.၇၄၈ ၀.၀၀၅ ၀.၇၅၃ ၇.၅၉၃ ၀.၀၀၂ ၇.၅၉၅ ၂.၈၆၅ ၀.၀၀၁ ၂.၈၆၇ ၈.၈၄၃ ၀.၀၃၅ ၈.၈၇၈ ၃.၇၇၂ ၀.၀၀၀ ၃.၇၇၃
၁၄၉ NETHERLANDS ၅.၆၅၅ ၁၇.၄၆၄ ၂၃.၁၁၉ ၅.၂၅ ၄.၀၈ ၉.၃၃ ၁၀.၇၅၅ ၁၄.၉၂၁ ၂၅.၆၇၆ ၂၈.၁၈၆ ၁၃.၇၈၇ ၄၁.၉၇၃ ၄၉.၂၃၅ ၁၁.၉၇၇ ၆၁.၂၁၂ ၉၁.၇၅၇ ၄၉.၆၈၃ ၁၄၁.၄၄ ၁၇၅.၈ ၃၅.၇၇ ၂၁၁.၅၇ ၂၁၂.၉၈၆ ၁၆.၉၅၆ ၂၂၉.၉၄၂ ၄၆၅.၃၅၂ ၃၈.၂၂ ၅၀၃.၅၇၂ ၁၉၁.၆၆၈ ၁၈.၇၀၈ ၂၁၀.၃၇၆
၁၅၀ NETHERLANDS ANTILLES ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၃ ၀.၀၁၁ ၀.၂၀၈ ၀.၂၀၈ ၀.၀၀၆ ၀.၀၉၄ ၀.၁ ၁.၅၂၇ ၀.၁၇၁ ၁.၆၉၈ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈
၁၅၁ NEW CALEDONIA ၀.၀၅၅ ၀.၀၅၅ ၀.၀၃၇ ၁.၄၉၇ ၁.၅၃၄ ၀.၀၃၉ ၀.၀၃၉ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁ ၀.၀၄၇ ၀.၀၄၇ ၀.၂၄၉ ၀.၂၄၉
၁၅၂ NEW ZEALAND ၀.၂၅၂ ၁၄.၅၆၅ ၁၄.၈၁၇ ၀.၆၉၄ ၁၀.၇၆၆ ၁၁.၄၆ ၀.၃၀၆ ၁၁.၂၉ ၁၁.၅၉၆ ၀.၅၀၅ ၁၄.၃၇၁ ၁၄.၈၇၆ ၁.၂၅၄ ၁၈.၁၈၇ ၁၉.၄၄၁ ၃.၈၅၂ ၂၃.၄၁၅ ၂၇.၂၆၇ ၁.၉၉၈ ၃၁.၉၀၆ ၃၃.၉၀၄ ၁.၁၀၆ ၁၈.၇၄၆ ၁၉.၈၅၂ ၂.၆၁၁ ၃၅.၅၁၈ ၃၈.၁၂၉ ၂.၁၈၂ ၂၀.၉၃၉ ၂၃.၁၂၁
၁၅၃ NICARAGUA ၀.၀၉၄ ၀.၀၉၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၂ ၀.၀၆၈ ၀.၀၆၈ ၂.၁၁၃ ၂.၁၁၃ ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆
၁၅၄ NIGER ၀.၀၂၆ ၀.၀၂၆ ၀.၇၀၃ ၀.၇၀၃ ၀.၂၀၅ ၀.၂၀၅ ၀.၀၀၆ ၀.၀၁၄ ၀.၀၂ ၀.၀၇၃ ၀.၀၀၄ ၀.၀၇၇ ၀.၄၂ ၀.၀၉၆ ၀.၅၁၆ ၀.၀၇ ၀.၀၆ ၀.၁၃ ၁.၃၆၂ ၀.၃၁၇ ၁.၆၇၉ ၀.၁၉၆ ၀.၀၀၃ ၀.၁၉၉
၁၅၅ NIGERIA ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆ ၀.၂၈ ၀.၈၇ ၁.၁၅ ၀.၀၉၄ ၀.၉၆၉ ၁.၀၆၃ ၀.၃၂၃ ၀.၆၅၈ ၀.၉၈၁ ၁.၇၄၁ ၃.၃ ၅.၀၄၁ ၁.၄၈၇ ၀.၃၉၃ ၁.၈၈
၁၅၈ NORWAY ၀.၀၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၁၂ ၀.၃၂၉ ၀.၃၂၉ ၁.၂၃၂ ၀.၀၁၂ ၁.၂၄၄ ၃.၄၃၈ ၀.၀၈၇ ၃.၅၂၅ ၁.၄၈၈ ၀.၅၁၄ ၂.၀၀၂ ၅.၁၆၉ ၁.၁၀၂ ၆.၂၇၁ ၇.၈၂၆ ၄.၅၈၅ ၁၂.၄၁၂ ၆.၉၄၉ ၅.၇၈၈ ၁၂.၇၃၇ ၁၀.၉၈၁ ၁၂.၀၅၉ ၂၃.၀၃၉ ၄.၁၈၅ ၅.၂၅၃ ၉.၄၃၈
၁၅၉ OMAN ၀.၂၆၆ ၉.၂၁ ၉.၄၇၆ ၀.၆၀၁ ၅.၉၀၇ ၆.၅၀၈ ၀.၀၃ ၅.၇၃၈ ၅.၇၆၈ ၀.၉၉၁ ၄.၂၂၈ ၅.၂၁၉ ၂.၃၄၈ ၇.၆၀၉ ၉.၉၅၇ ၄.၃၄၂ ၈.၀၉၆ ၁၂.၄၃၈ ၄.၄ ၁၁.၈၉၈ ၁၆.၂၉၈ ၃.၀၂၂ ၈.၂၈၅ ၁၁.၃၀၇ ၅.၉၉၉ ၂၃.၆၉၂ ၂၉.၆၉၂ ၂.၂၀၃ ၃၀.၈၂ ၃၃.၀၂၃
၁၆၀ PAKISTAN ၂၃.၀၀၇ ၇.၂၈၄ ၃၀.၂၉၁ ၂၄.၀၉၅ ၇.၇၉၇ ၃၁.၈၉၂ ၂၆.၃၆၂ ၅.၀၅၂ ၃၁.၄၁၄ ၂၃.၂၀၈ ၅.၄၃၁ ၂၈.၆၃၉ ၃၇.၀၇၅ ၇.၃၂ ၄၄.၃၉၅ ၆၁.၇၂၃ ၁၇.၉၅၆ ၇၉.၆၇၉ ၆၃.၅၄၉ ၈၁.၆၁၆ ၁၄၅.၁၆၅ ၂၄.၂၂၃ ၇၁.၀၇၄ ၉၅.၂၉၈ ၃၆.၀၆၇ ၂၄.၀၁၃ ၆၀.၀၈ ၂၈.၇၆၃ ၉.၆၁၉ ၃၈.၃၈၁
၁၆၁ PALAU ၀.၀၆ ၀.၀၀၉ ၀.၀၆၉ ၀.၃၈၇ ၀.၃၈၇ ၀.၀၀၁ ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၅ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃
၁၆၂ PANAMA ၀.၀၂၈ ၀.၀၁၂ ၀.၀၄ ၀.၀၅၁ ၀.၀၄၉ ၀.၁ ၂.၂၂၁ ၂.၂၂၁ ၀.၇၅၉ ၀.၃၈၂ ၁.၁၄၁ ၁.၄၃၈ ၀.၂၀၉ ၁.၆၄၇ ၁.၆၉၅ ၁.၆၉၅ ၁.၄၈၆ ၀.၀၀၇ ၁.၄၉၂ ၂.၀၉၈ ၂.၀၉၈ ၁.၁၃၇ ၁.၁၃၇
၁၆၃ PAPUA NEW GUINEA ၀.၃၉၄ ၀.၃၉၄ ၀.၀၉၁ ၀.၀၉၁ ၀.၀၂၂ ၁.၈၃ ၁.၈၅၂ ၀.၆၀၉ ၀.၅၂၈ ၁.၁၃၇ ၀.၅၈၉ ၀.၀၃၉ ၀.၆၂၈ ၀.၀၇၅ ၀.၀၀၂ ၀.၀၇၇ ၀.၀၅၂ ၀.၀၅၂ ၁.၆၆ ၁.၆၆
၁၆၄ PARAGUAY ၀.၀၁၉ ၀.၂၉၈ ၀.၃၁၇ ၀.၀၁ ၂.၅၈၆ ၂.၅၉၆ ၀.၀၆၄ ၅.၇၂၃ ၅.၇၈၇ ၀.၂၄၀ ၁၈.၃၅၄ ၁၈.၅၉၄ ၀.၀၈၇ ၃.၁၁၃ ၃.၁၉၉ ၀.၁၀၀ ၃.၂၀၈ ၃.၃၀၈ ၀.၀၁၉ ၁.၄၃၅ ၁.၄၅၄
၁၆၅ PERU ၀.၃၃၅ ၀.၃၃၅ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၇ ၁.၅၁၈ ၁.၅၁၈ ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅ ၀.၁၆ ၀.၁၆ ၂.၁၄၆ ၀.၀၅၉ ၂.၂၀၅ ၃.၃၀၅ ၀.၁၉၅ ၃.၅ ၁.၈၂၇ ၀.၁၁၈ ၁.၉၄၆ ၃.၆၈၈ ၀.၀၆၅ ၃.၇၅၄ ၁.၈၁၁ ၀.၁၅၁ ၁.၉၆၂
၁၆၆ PHILIPPINES ၃၄.၃၂၃ ၁၄.၆၃၆ ၄၈.၉၅၉ ၂၆.၀၁၇ ၁၇.၉၉၅ ၄၄.၀၁၂ ၁၂.၂၅ ၂၁.၁၀၃ ၃၃.၃၅၃ ၁၂.၇၇၈ ၁၅.၄၂၂ ၂၈.၂ ၈.၂၃၂ ၂၀.၇၆၆ ၂၈.၉၉၈ ၄၀.၉၈၅ ၁၅.၄၉၈ ၅၆.၄၈၃ ၁၉.၉၁၉ ၃၂.၅၁၂ ၅၂.၄၃၂ ၁၁.၄၅၆ ၁၇.၁၇၇ ၂၈.၆၃၃ ၁၃၆.၉၂၉ ၄၇.၇၉၉ ၁၈၄.၇၂၈ ၅၀.၀၄၂ ၁၉.၁၇၉ ၆၉.၂၂၁
၁၆၈ POLAND ၁.၇၅၄ ၀.၇၀၂ ၂.၄၅၆ ၀.၅၅ ၀.၁၈၁ ၀.၇၃၁ ၁.၆၂၁ ၁.၄၃၅ ၃.၀၅၆ ၁၀.၆၃၅ ၅.၁၆၉ ၁၅.၈၀၄ ၁၇.၈၆၂ ၁.၈၁၂ ၁၉.၆၇၄ ၃၅.၁၈၉ ၄.၅၃၂ ၃၉.၇၂၁ ၆၄.၂၀၄ ၈.၅၆၇ ၇၂.၇၇၁ ၆၄.၄၈ ၁၀.၈၉၅ ၇၅.၃၇၅ ၁၆၂.၅၇ ၉.၄၄၄ ၁၇၂.၀၁၄ ၈၃.၉၂၄ ၃.၁၈၄ ၈၇.၁၀၈
၁၆၉ PORTUGAL ၀.၀၃၇ ၀.၀၂၆ ၀.၀၆၃ ၂.၅၈၃ ၀.၀၅၅ ၂.၆၃၈ ၀.၄၃၇ ၀.၀၇၈ ၀.၅၁၅ ၁. ၀.၅၆၅ ၁.၅၆၅ ၀.၆၃၇ ၀.၀၅၈ ၀.၆၉၅ ၁.၀၂၈ ၀.၃၈၈ ၁.၄၁၆ ၂.၁၀၂ ၁.၂၁ ၃.၃၁၂ ၃.၂၂၄ ၀.၅၁၆ ၃.၇၄၀ ၅.၉၂၅ ၂.၂၇၅ ၈.၂၀၀ ၂.၉၉၃ ၀.၈၉ ၃.၈၈၄
၁၇၀ PUERTO RICO ၀.၁၁၅ ၀.၁၁၅ ၀.၆၆၅ ၀.၆၆၅ ၀.၈၇၆ ၀.၈၇၆ ၂.၄၂ ၂.၄၂ ၀.၀၀၉ ၂.၁၂၉ ၂.၁၃၈ ၁.၄၃၇ ၁.၄၃၇ ၀.၀၀၉ ၂.၀၁၁ ၂.၀၂ ၀.၀၁၈ ၀.၆၃၇ ၀.၆၅၅
၁၇၁ QATAR ၁.၂၉၂ ၄.၆၂၅ ၅.၉၁၇ ၁.၁၅၉ ၄.၆၈၇ ၅.၈၄၆ ၀.၈၂၆ ၀.၄၃၂ ၁.၂၅၈ ၂.၈၂၁ ၁.၇၉ ၄.၆၁၁ ၃.၁၁၆ ၀.၀၀၃ ၃.၁၁၉ ၃.၈၀၂ ၀.၀၀၃ ၃.၈၀၅ ၇.၁၉၆ ၀.၀၃၈ ၇.၂၃၄ ၄.၈၀၂ ၀.၀၄၈ ၄.၈၄၉ ၁၁.၆၈၆ ၈.၇၅၅ ၂၀.၄၄၁ ၄.၃၀၄ ၃.၃၅၆ ၇.၆၅၉
၁၇၂ REUNION ၀.၁၇၁ ၀.၁၇၁ ၀.၀၀၇ ၀.၁၃၃ ၀.၁၄ ၀.၂၂၂ ၀.၂၂၂ ၀.၀၄၇ ၀.၀၄၇ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၁ ၀.၀၂၆ ၀. ၀.၀၂၆
၁၇၃ ROMANIA ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁ ၀.၂၉၁ ၀.၀၈၃ ၀.၃၇၄ ၀.၀၈၄ ၀.၀၈၄ ၀.၃၉၆ ၁.၆၉ ၂.၀၈၆ ၀.၇၂ ၁.၁၃၅ ၁.၈၅၅ ၁.၈၀၆ ၂.၇၃၅ ၄.၅၄၁ ၁.၅၇၃ ၃.၁၃၂ ၄.၇၀၆ ၀.၈၇၉ ၂.၂၈၈ ၃.၁၆၇ ၃.၄၈၅ ၈.၈၉၃ ၁၂.၃၇၈ ၁.၉၄၄ ၅.၁၁၂ ၇.၀၅၅
၁၇၄ RUSSIAN FEDERATION ၁၂.၅၇၉ ၁.၅၃၉ ၁၄.၁၁၈ ၂၇.၃၇၆ ၁.၀၆၈ ၂၈.၄၄၄ ၁၅.၈၁၆ ၄.၉၅၂ ၂၀.၇၆၈ ၁၅.၅၈၅ ၂၅.၃၀၅ ၄၀.၈၉ ၃.၈၅၂ ၂၄.၂၇၂ ၂၈.၁၂၄ ၈.၄၂၂ ၃၃.၄၀၉ ၄၁.၈၃၁ ၂၀.၂ ၂၈.၀၂၅ ၄၈.၂၂၅ ၈.၇၆၇ ၂၀.၆၃၉ ၂၉.၄၀၆ ၂၇.၂၇၈ ၁၉.၃၄၄ ၄၆.၆၂၂ ၁၃.၈၉ ၉.၃၈၅ ၂၃.၂၇၄
၁၇၅ RWANDA ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၁၇၆ SAINT HELENA ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁ ၀.၀၂ ၀.၀၂ ၀.၂၅၉ ၀.၂၅၉ ၀.၇၆၂ ၀.၇၆၂ ၀.၈၅၉ ၀.၈၅၉ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၁၄ ၁.၉၉၃ ၁.၉၉၃ ၀.၁၅၃ ၀.၁၅၃
၁၈၂ SAN MARINO ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၅၃ ၀.၀၅၃
၁၈၄ SAUDI ARABIA ၂၉.၇၀၇ ၆၉.၂၉၃ ၉၉. ၃၁.၉၃၅ ၄၆.၉၇၈ ၇၈.၉၁၃ ၁၄.၃၅၈ ၆၀.၁၈၈ ၇၄.၅၄၆ ၂၃.၆၃၄ ၇၇.၅၈၉ ၁၀၁.၂၂၃ ၂၁.၅၃၈ ၈၀.၃၀၇ ၁၀၁.၈၄၅ ၂၁.၅၀၂ ၉၄.၀၆ ၁၁၅.၅၆၂ ၃၀.၈၆၂ ၁၄၅.၈၁၃ ၁၇၆.၆၇၅ ၅.၃၂၆ ၆၄.၇၆၈ ၇၀.၀၉၃ ၂၂.၁၈၅ ၁၄၉.၈၉၂ ၁၇၂.၀၇၇ ၈.၉၉၇ ၅၂.၁၅၆ ၆၁.၁၅၃
၁၈၅ SENEGAL ၀.၂၀၃ ၀.၂၀၃ ၀.၁၀၇ ၀.၁၀၇ ၆.၄၆ ၆.၄၆ ၀.၉၇၆ ၀.၉၇၆ ၀.၂၇၁ ၀.၅၆၄ ၀.၈၃၅ ၂၄.၃၈၇ ၀.၄၉၆ ၂၄.၈၈၃ ၅.၈၇၄ ၀.၀၇၄ ၅.၉၄၇ ၂၆.၂၃၂ ၀.၂၀၁ ၂၆.၄၃၄
၁၈၆ SERBIA ၀.၁၈၃ ၀.၁၈၃ ၀.၁၆၂ ၀.၁၆၂ ၀.၃၄၉ ၀.၃၄၉ ၀.၃၆၄ ၀.၁၅၄ ၀.၅၁၈ ၀.၄၅၇ ၀.၅၄၉ ၁.၀၀၆ ၀.၃၉၄ ၀.၂၆၆ ၀.၆၆ ၁.၂၅၇ ၀.၄၈၆ ၁.၇၄၂ ၀.၃၉၆ ၀.၁၅၂ ၀.၅၄၉
၁၈၈ SIERRA LEONE ၀.၇၅၁ ၀.၅၃၂ ၁.၂၈၃ ၀.၀၆၄ ၀.၀၆၄ ၀.၂၂၅ ၀.၂၂၅ ၀.၀၃၅ ၀.၃၁၈ ၀.၃၅၃ ၀.၀၀၃ ၀.၁၄၂ ၀.၁၄၅ ၀.၀၉၉ ၀.၂၅၁ ၀.၃၅ ၀.၁၄၇ ၀.၀၃၄ ၀.၁၈၁ ၁.၅၄၉ ၀.၀၀၁ ၁.၅၅၀ ၁.၉၅၀ ၀.၀၁၇ ၁.၉၆၇ ၀.၉၈၃ ၀.၀၁၆ ၀.၉၉၉
၁၈၉ SINGAPORE ၅၄၂.၇၅၁ ၂၅၁၆.၁၃၃ ၃၀၅၈.၈၈၄ ၂၉၁.၃၅ ၂၅၃၅.၄၂၄ ၂၈၂၆.၇၇၄ ၆၉၄.၀၂၇ ၂၉၁၀.၂၂၂ ၃၆၀၄.၂၄၉ ၇၅၈.၅၃၅ ၄၁၃၇.၃၆၈ ၄၈၉၅.၉၀၃ ၇၂၅.၄၃၄ ၂၉၇၀.၈၉၈ ၃၆၉၆.၃၃၂ ၄၇၂.၇၆၄ ၂၄၉၄.၃၁၅ ၂၉၆၇.၀၇၉ ၇၅၃.၄၉၅ ၃၀၈၄.၆၃၁ ၃၈၃၈.၁၂၆ ၁၉၀.၄၂၉ ၁၈၀၆.၈၂၉ ၁၉၉၇.၂၅၈ ၃၄၄.၇၄ ၃၁၆၂.၅၁၁ ၃၅၀၇.၂၅ ၉၂.၄၈၃ ၁၅၅၄.၆၂၅ ၁၆၄၇.၁၀၈
၁၉၀ SLOVAK REPUBLIC, SLOVAKIA ၀.၀၂၃ ၀.၀၂၃ ၀.၀၇၉ ၀.၀၇၉ ၂.၇၇၆ ၁.၂၇၅ ၄.၀၅၁ ၀.၅၅ ၁.၇၃၃ ၂.၂၈၄ ၂.၁၈၁ ၀.၄၃၉ ၂.၆၂ ၂.၆၄၉ ၁.၃၀၅ ၃.၉၅၄ ၁.၉၂၅ ၀.၂၀၅ ၂.၁၃
၁၉၁ SLOVENIA ၀.၃၁ ၀.၃၁ ၁.၃၈၃ ၁.၃၈၃ ၉.၃၃၂ ၀.၈၈၂ ၁၀.၂၁၄ ၃၄.၃၉၆ ၀.၉၄၆ ၃၅.၃၄၃ ၂၁.၂၇၃ ၀.၇၀၈ ၂၁.၉၈၁ ၄၁.၃၅၁ ၁.၅ ၄၂.၈၅၁ ၁၅.၄၃၉ ၀.၄၈၉ ၁၅.၉၂၈
၁၉၂ SOLOMON ISLANDS ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၄၆ ၀.၀၂၂ ၀.၀၆၈ ၀.၁၃၃ ၀.၁၃၃ ၀.၃၀၇ ၀.၀၆၆ ၀.၃၇၃ ၀.၀၃၀ ၀.၀၃၀ ၀.၁၇၃ ၀.၁၇၃ ၀.၅၀၂ ၀.၀၀၀ ၀.၅၀၂
၁၉၃ SOMALIA ၀.၀၄၄ ၀.၀၄၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၁၉၄ SOUTH AFRICA ၈.၀၃၂ ၀.၀၈၃ ၈.၁၁၅ ၃.၆၀၂ ၂.၃၆၂ ၅.၉၆၄ ၅.၀၉၂ ၀.၁၂၂ ၅.၂၁၄ ၃.၁၂၇ ၀.၅၀၂ ၃.၆၂၉ ၀.၈၂၈ ၁.၅၁၃ ၂.၃၄၁ ၄.၄၁၉ ၅.၉၅၅ ၁၀.၃၇၄ ၁၅.၆၉၉ ၉.၉၈၂ ၂၅.၆၈၁ ၃.၈၈၃ ၁.၂၄၅ ၅.၁၂၈ ၆.၈၈၃ ၇.၂၄၆ ၁၄.၁၂၉ ၁၂.၀၃၈ ၁.၂၄၈ ၁၃.၂၈၆
၁၉၆ SPAIN ၁၆.၀၅ ၆.၀၈၂ ၂၂.၁၃၂ ၁၉.၈၆၁ ၂.၉၁၄ ၂၂.၇၇၅ ၂၈.၉၅၈ ၁၂.၆၂၆ ၄၁.၅၈၄ ၃၇.၈၉၈ ၆.၃၆၂ ၄၄.၂၆ ၃၇.၅၅၈ ၁၁.၃၆၆ ၄၈.၉၂၄ ၈၂.၄၈၈ ၂၆.၇၇၆ ၁၀၉.၂၆၄ ၁၆၉.၀၇၇ ၂၁.၂၆၁ ၁၉၀.၃၃၉ ၁၆၉.၂၄၈ ၁၀.၃၂၆ ၁၇၉.၅၇၄ ၅၀၇.၆၂၅ ၁၉.၃၅ ၅၂၆.၉၇၅ ၂၄၅.၃၁၃ ၉.၂၇၅ ၂၅၄.၅၈၈
၁၉၇ SRI LANKA ၀.၄၇၄ ၀.၆၆၁ ၁.၁၃၅ ၀.၇၂၁ ၀.၁၅ ၀.၈၇၁ ၀.၇၄၄ ၀.၃၈၇ ၁.၁၃၁ ၃.၄၁၇ ၀.၇၄၃ ၄.၁၆ ၂.၉၃၂ ၀.၁၅၄ ၃.၀၈၆ ၂၄.၅၂၉ ၀.၂၁၉ ၂၄.၇၄၈ ၃၈.၄၀၈ ၁.၄၆၁ ၃၉.၈၆၉ ၅.၁၂၉ ၃.၅၂၇ ၈.၆၅၆ ၂၃.၉၆၄ ၃.၅၇၉ ၂၇.၅၄၃ ၁၄.၄၇၅ ၀.၈၂၂ ၁၅.၂၉၇
၁၉၉ SURINAME ၀.၁၈၄ ၀.၁၈၄ ၀.၀၃ ၀.၀၆၆ ၀.၀၉၆ ၀.၀၀၆ ၀.၀၃၂ ၀.၀၃၈ ၃.၁၄၉ ၃.၁၄၉ ၀.၀၉၉ ၀.၀၉၉ ၁.၂ ၀.၁၆၂ ၁.၃၆၂ ၀.၀၅၈ ၀.၀၅၈ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၂၀ ၀.၀၂၀ ၀.၀၉၆ ၀.၀၉၆
၂၀၀ SVALBARD AND JAN MAYEN ၀.၀၇၅ ၀.၀၇၅
၂၀၁ SWAZILAND ၀.၂၉၁ ၀.၂၉၁ ၀.၁၄၅ ၀.၅၀၉ ၀.၆၅၄ ၁.၀၇၇ ၀.၁၅၉ ၁.၂၃၆ ၀.၂၅၈ ၀.၀၅၃ ၀.၃၁၁ ၀.၃၀၉ ၄.၂၅၂ ၄.၅၆၁ ၀.၇၂၈ ၁.၄၀၁ ၂.၁၂၉ ၀.၁၉၂ ၆.၃၄ ၆.၅၃၂ ၀.၂၉၅ ၂.၅၃၇ ၂.၈၃၂ ၀.၅၇၅ ၅.၂၉၅ ၅.၈၇၁ ၀.၅၃၅ ၁.၇၄၂ ၂.၂၇၇
၂၀၂ SWEDEN ၂.၅၇၂ ၁၇.၅၆၉ ၂၀.၁၄၁ ၁.၉၈၆ ၁၀.၆၈၉ ၁၂.၆၇၅ ၄.၃၁၉ ၇.၈၂ ၁၂.၁၃၉ ၂၈.၁၆ ၁၃.၀၉၈ ၄၁.၂၅၈ ၇.၉၇၆ ၁၃.၃၄၇ ၂၁.၃၂၃ ၁၈.၂၇၄ ၄၃.၇၂၂ ၆၁.၉၉၆ ၃၁.၉၃၄ ၂၃.၉၁၄ ၅၅.၈၄၈ ၃၅.၀၆၃ ၃၂.၈၂၄ ၆၇.၈၈၇ ၈၃.၅၀၉ ၄၃.၀၅၈ ၁၂၆.၅၆၆ ၃၇.၇၂၉ ၁၄.၄၀၇ ၅၂.၁၃၅
၂၀၃ SWITZERLAND ၅.၄၇၆ ၂.၉၉၇ ၈.၄၇၃ ၃.၆၄၈ ၄.၃၇၁ ၈.၀၁၉ ၂.၆၅ ၆.၅၇ ၉.၂၂ ၁.၇၀၄ ၁၉.၃၂၄ ၂၁.၀၂၈ ၁၀.၃၁၉ ၁၁.၀၅ ၂၁.၃၆၉ ၈.၃၂၉ ၂၁.၄၈၁ ၂၉.၈၁ ၅.၆၆၃ ၁၃.၅၈၉ ၁၉.၂၅၂ ၄.၅၃၄ ၄.၅၂ ၉.၀၅၄ ၉.၆၃၄ ၁၂.၅၁၆ ၂၂.၁၅ ၁.၆၅၂ ၅.၇၉၆ ၇.၄၄၈
၂၀၄ SYRIAN ARAB REPUBLIC ၀.၂၇ ၀.၂၇ ၀.၂၁၇ ၀.၀၁၆ ၀.၂၃၃ ၀.၃၂၂ ၀.၃၂၂ ၀.၃၁၉ ၀.၃၁၉ ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃
၂၀၆ TAIWAN ၀.၀၅၃ ၆၂.၀၆၂ ၆၂.၁၁၅ ၀.၀၈၃ ၄၃.၀၇ ၄၃.၁၅၃ ၀.၈၃၁ ၃၇.၇၂၆ ၃၈.၅၅၇ ၁.၅၀၅ ၃၃.၃၆၉ ၃၄.၈၇၄ ၄.၇၈၁ ၂၉.၃၆၅ ၃၄.၁၄၆ ၁၄.၄၉၃ ၆၇.၂၃၆ ၈၁.၇၂၉ ၂၃.၃၆၂ ၁၆၅.၇၀၈ ၁၈၉.၀၆၉ ၁၈.၆၁၇ ၉၄.၀၃၂ ၁၁၂.၆၅ ၃၇.၇၀၉ ၁၄၉.၁၃၁ ၁၈၆.၈၄ ၁၈.၃၉၆ ၇၀.၅၀၅ ၈၈.၉၀၂
၂၀၇ TAJIKISTAN ၀.၁၂ ၀.၁၂ ၀.၂၆၇ ၀.၂၆၇ ၀.၂၂၄ ၀.၂၂၄ ၀.၃၇၄ ၀.၃၇၄ ၀.၁၇၃ ၀.၁၇၃
၂၀၈ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF ၀.၀၇၉ ၀.၀၇၉ ၀.၀၀၆ ၀.၂၀၉ ၀.၂၁၅ ၀.၀၂၃ ၀.၀၂၃ ၀.၀၁၈ ၀.၀၅၉ ၀.၀၇၇ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၄ ၀.၀၈၆ ၀.၀၀၅ ၀.၀၉၁ ၀.၀၀၄ ၀.၀၄၅ ၀.၀၄၉ ၀.၇၂၀ ၀.၅၉၅ ၁.၃၁၅ ၀.၃၅၇ ၀.၂၂၃ ၀.၅၈
၂၀၉ THAILAND ၃၈၂၃.၈၂၇ ၆၉၁.၁၄၅ ၄၅၁၄.၉၇၂ ၄၀၀၀.၅၇၆ ၆၉၆.၇၉၃ ၄၆၉၇.၃၆၉ ၄၃၀၄.၀၁၆ ၁၃၆၂.၄၆၈ ၅၆၆၆.၄၈၄ ၄၀၃၁.၇၅၆ ၁၆၇၉.၄၃၄ ၅၇၁၁.၁၉ ၂၈၉၃.၁၈ ၁၉၇၂.၈၈၆ ၄၈၆၆.၀၆၆ ၂၂၀၂.၂၃၄ ၂၀၈၅.၉၃၈ ၄၂၈၈.၁၇၂ ၂၈၄၆.၀၆၆ ၂၂၂၈.၆၄၁ ၅၀၇၄.၇၀၇ ၁၅၅၉.၄၅၄ ၁၃၉၈.၅၈၅ ၂၉၅၈.၀၃၉ ၃၂၇၇.၅၇၅ ၂၁၈၇.၅၉၈ ၅၄၆၅.၁၇၃ ၁၃၁၃.၁၅၁ ၈၈၆.၉၉၇ ၂၂၀၀.၁၄၈
၂၁၀ TOGO ၀.၂၇၉ ၀.၂၇၉ ၀.၂၈၅ ၀.၂၈၅ ၀.၅၁၃ ၀.၀၂၁ ၀.၅၃၄ ၀.၃၁၅ ၀.၁၂၄ ၀.၄၃၉ ၀.၀၂၆ ၀.၀၂၆ ၀.၉၈ ၀.၀၀၃ ၀.၉၈၃ ၁.၉၁၁ ၀.၂၂၃ ၂.၁၃၃ ၆.၈၀၀ ၆.၈၀၀ ၆.၄၆၉ ၀.၅၃၂ ၇.၀၀၁ ၅.၃၉၅ ၅.၃၉၅
၂၁၁ TOKELAU ၀.၈၃၀ ၀.၈၃၀ ၀.၂၀၉ ၀.၂၀၉ ၀.၄၆၅ ၀.၄၆၅ ၀.၀၈၁ ၀.၈၇ ၀.၉၅၁ ၀.၀၁၁ ၄.၂၃၂ ၄.၂၄၃ ၀.၃၀၆ ၀.၃၀၆ ၀.၀၉၄ ၀.၀၉၄ ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂ ၀.၀၆၅ ၀.၀၆၅
၂၁၃ TRINIDAD AND TOBAGO ၀.၀၂၇ ၀.၀၂၇ ၀.၀၅၄ ၀.၀၅၄ ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၂.၁၁၄ ၂.၁၁၄ ၂.၅၆၉ ၂.၅၆၉ ၀.၂၂၁ ၀.၂၂၁ ၃.၀၁၁ ၀.၀၀၁ ၃.၀၁၂ ၀.၄၄၈ ၀.၀၁၆ ၀.၄၆၄
၂၁၄ TUNISIA ၁.၀၀၂ ၀.၀၈၆ ၁.၀၈၈ ၀.၁၇၆ ၀.၀၄ ၀.၂၁၆ ၀.၁၃၉ ၀.၂၁၁ ၀.၃၅ ၀.၀၇ ၀.၁၈၄ ၀.၂၅၄ ၀.၀၄ ၀.၀၄ ၀.၀၀၇ ၀.၃၉၅ ၀.၄၀၂ ၀.၀၁၂ ၀.၉၅၆ ၀.၉၆၈ ၀.၀၀၉ ၀.၁၇၁ ၀.၁၈ ၀.၃၅၅ ၀.၁၄၆ ၀.၅ ၀.၀၁၅ ၀.၁၀၃ ၀.၁၁၈
၂၁၅ TURKEY ၅.၆၇ ၈.၈၂၈ ၁၄.၄၉၈ ၀.၃၂၅ ၁.၆၀၅ ၁.၉၃ ၁.၂၆၅ ၅.၀၆ ၆.၃၂၅ ၃.၃၃၆ ၁၁.၅၁၈ ၁၄.၈၅၄ ၁.၇၄၉ ၁၂.၅၃၈ ၁၄.၂၈၇ ၄.၁၀၉ ၂၆.၂၁၁ ၃၀.၃၂ ၁၀.၃၈၉ ၅၆.၉၅၆ ၆၇.၃၄၆ ၁၁.၆၅ ၁၅.၃၂၄ ၂၆.၉၇၅ ၁၄.၂၄၆ ၆၄.၆၈၄ ၇၈.၉၃ ၄.၅၇၁ ၁၄.၆၂ ၁၉.၁၉၁
၂၁၈ UGANDA ၀.၀၃၀ ၀.၀၃၀ ၀.၅၃၇ ၀.၀၀၅ ၀.၅၄၂ ၀.၀၉၆ ၀.၀၀၁ ၀.၀၉၇ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၀.၈၇၂ ၀.၈၇၂ ၀.၀၅၁ ၀.၁၃၁ ၀.၁၈၂ ၀.၁၅၆ ၀.၁၅၇ ၀.၁၉၉ ၀.၁၉၉ ၀.၂၀၂ ၀.၂၀၂
၂၁၉ UKRAINE ၀.၁၁၄ ၃.၀၆၂ ၃.၁၇၆ ၁.၂၄၃ ၄.၇၂၆ ၅.၉၆၉ ၁.၈၉၃ ၁၅.၀၀၂ ၁၆.၈၉၅ ၈.၇၂၆ ၁၁.၁၂၃ ၁၉.၈၄၉ ၁၂.၅၃၈ ၁၂.၈၅၆ ၂၅.၃၉၄ ၂၁.၁၂၄ ၂၂.၁၀၁ ၄၃.၂၂၅ ၃.၃ ၄၇.၉၇၃ ၅၁.၂၇၃ ၉.၉၀၇ ၁၀.၁၇၄ ၂၀.၀၈ ၁.၅၇၅ ၂၄.၃၇၆ ၂၅.၉၅ ၁.၅၉၅ ၂၄.၅၃၅ ၂၆.၁၂၉
၂၂၀ UNITED ARAB EMIRATES ၃၅.၂၉၄ ၅၈.၁၃၂ ၉၃.၄၂၆ ၃၇.၅၅ ၅၂.၉၂၆ ၉၀.၄၇၆ ၆၆.၀၃၃ ၇၅.၈၈၉ ၁၄၁.၉၂၂ ၇၅.၀၂၃ ၁၂၄.၄၈၆ ၁၉၉.၅၀၉ ၆၆.၆၉ ၁၂၈.၉၉၃ ၁၉၅.၆၈၃ ၇၃.၃၅၉ ၁၃၅.၈၄၇ ၂၀၉.၂၀၆ ၆၉.၄၇၆ ၈၄.၇၃၉ ၁၅၄.၂၁၅ ၃၂.၁၆၂ ၄၅.၂၅၁ ၇၇.၄၁၄ ၁၀၆.၄၃၉ ၁၄၈.၄၇၉ ၂၅၄.၉၁၈ ၃၄.၂၄ ၁၁၁.၄၂၂ ၁၄၅.၆၆၂
၂၂၁ UNITED KINGDOM ၁၆.၅၇၉ ၂၇.၁၆၄ ၄၃.၇၄၃ ၂၆.၉၄၂ ၁၅.၀၁၅ ၄၁.၉၅၇ ၄၈.၅၈၃ ၂၄.၅၀၄ ၇၃.၀၈၇ ၅၃.၇၆၂ ၂၈.၆၃၂ ၈၂.၃၉၄ ၃၅.၂၃၇ ၁၅.၁၃၇ ၅၀.၃၇၄ ၁၃၄.၀၇၈ ၃၃.၁၅၈ ၁၆၇.၂၃၆ ၃၁၁.၂၇ ၄၉.၅၀၃ ၃၆၀.၇၇၃ ၂၃၃.၁ ၃၈.၈၃၄ ၂၇၁.၉၃၄ ၅၀၈.၈၃၆ ၆၁.၄၈ ၅၇၀.၃၁၇ ၂၁၂.၈၆၈ ၃၀.၆၃၂ ၂၄၃.၅
၂၂၃ UNITED STATES OF AMERICA ၂၉.၄၄၇ ၂၆၃.၆၂၄ ၂၉၃.၀၇၁ ၂.၈၁၅ ၁၁၉.၉၇၆ ၁၂၂.၇၉၁ ၂၄.၇၇၈ ၇၉.၆၆၂ ၁၀၄.၄၄ ၅၀.၅၉၅ ၄၉၄.၀၄၅ ၅၄၄.၆၄ ၆၉.၂၁၇ ၁၂၇.၆၈၅ ၁၉၆.၉၀၂ ၁၉၂.၀၅ ၄၉၈.၅၈ ၆၉၀.၆၃ ၂၈၆.၇၁၄ ၄၃၁.၆၆၆ ၇၁၈.၃၈ ၂၉၃.၁၃၇ ၁၆၂.၅၈၇ ၄၅၅.၇၂၄ ၇၃၇.၆၀၄ ၃၂၇.၅၆၂ ၁၀၆၅.၁၆၇ ၃၇၇.၀၉၆ ၁၈၅.၃၁၇ ၅၆၂.၄၁၃
၂၂၄ URUGUAY ၀.၀၀၄ ၀.၀၇၅ ၀.၀၇၉ ၀.၀၅၈ ၀.၀၃၈ ၀.၀၉၆ ၀.၂၅၃ ၀.၂၅၃ ၀.၀၃၉ ၀.၉၁၈ ၀.၉၅၇ ၀.၁၄၁ ၀.၃၅၈ ၀.၄၉၉ ၀.၅၁၁ ၀.၁၀၁ ၀.၆၁၂ ၀.၃၈၄ ၀.၃၈၄ ၁.၀၂၇ ၀.၅၂၆ ၁.၅၅၂ ၀.၆၂၄ ၀.၆၂၄
၂၂၅ UZBEKISTAN ၀.၁၂၅ ၀.၁၂၅ ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆ ၀.၂၈၆ ၀.၂၈၆ ၀.၁၆၉ ၀.၁၆၉ ၁.၃၃၆ ၁.၃၃၆ ၀.၈၆၅ ၀.၈၆၅ ၁.၁၁၀ ၁.၁၁၀ ၀.၄၄၉ ၀.၄၄၉
၂၂၆ VANUATU ၀.၀၇၂ ၀.၀၇၂ ၀.၀၂၈ ၀.၀၂၈ ၀.၀၃၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၃၄ ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅
၂၂၇ VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF ၄.၄၈၆ ၀.၄၉ ၄.၉၇၆ ၉.၆၄၆ ၀.၄၇ ၁၀.၁၁၆ ၀.၉၃၉ ၁.၃၀၇ ၂.၂၄၆ ၁.၁၈၂ ၄.၀၈၉ ၅.၂၇၁ ၀.၇၅၅ ၀.၄၇၉ ၁.၂၃၄ ၂.၅၂၈ ၀.၇၈၇ ၃.၃၁၅ ၁.၀၂၅ ၀.၈၃၈ ၁.၈၆၂ ၀.၂၂၈ ၀.၀၃ ၀.၂၅၉ ၂.၉၆၆ ၀.၀၇ ၃.၀၃၅ ၀.၇၅၂ ၀.၀၅ ၀.၈၀၂
၂၂၈ VIET NAM ၈၁.၀၉ ၆၂.၂၉ ၁၄၃.၃၈ ၈၁.၂၄၃ ၇၄.၇၁၆ ၁၅၅.၉၅၉ ၁၁၁.၁၅၅ ၁၆၉.၈၅၉ ၂၈၁.၀၁၄ ၈၀.၁၈၁ ၂၄၁.၁၅၃ ၃၂၁.၃၃၄ ၅၆.၆၆၉ ၂၉၀.၁၈၉ ၃၄၆.၈၅၈ ၈၈.၂၅၃ ၄၀၅.၇၈၃ ၄၉၄.၀၃၆ ၁၂၇.၅၁၁ ၅၈၇.၃ ၇၁၄.၈၁ ၁၃၃.၇၁၅ ၂၉၂.၅၄၄ ၄၂၆.၂၅၉ ၂၃၅.၀၀၄ ၆၂၀.၃၉၉ ၈၅၅.၄၀၃ ၇၅.၄၂၇ ၂၇၀.၁၂၅ ၃၄၅.၅၅၂
၂၃၀ VIRGIN ISLANDS, U.S. ၀.၁၄၀ ၀.၀၃၇ ၀.၁၇၇ ၈.၇၇၁ ၈.၇၇၁ ၀.၁၅ ၀.၀၃၆ ၀.၁၈၆ ၂.၆၂၇ ၂.၆၂၇ ၂.၁၀၆ ၂.၁၀၆ ၀.၁၄၄ ၀.၁၄၄ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
၂၃၁ WALLIS AND FUTUNA ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၀.၁၇၆ ၀.၁၇၆ ၀.၂၁ ၀.၂၁
၂၃၃ YEMEN ၀.၀၈၄ ၀.၀၀၃ ၀.၀၈၇ ၀.၀၇၆ ၀.၃၃၂ ၀.၄၀၈ ၀.၀၁၉ ၀.၅၆၆ ၀.၅၈၅ ၀.၄၆၂ ၀.၀၃၁ ၀.၄၉၃ ၀.၅၄၅ ၀.၁၄၅ ၀.၆၉ ၀.၃၀၅ ၀.၀၅၄ ၀.၃၅၉ ၀.၁၇၁ ၀.၁၄၆ ၀.၃၁၇ ၀.၁၂၅ ၀.၀၇ ၀.၁၉၅ ၀.၆၂၅ ၀.၀၃၈ ၀.၆၆၃ ၀.၂၂၄ ၀.၂၂၄
၂၃၅ ZIMBABWE ၀.၈၁၄ ၀.၈၁၄ ၀.၁၁၆ ၅.၉၃၈ ၆.၀၅၄ ၀.၀၀၁ ၀.၂၂၄ ၀.၂၂၅ ၀.၀၆၅ ၀.၄၇၈ ၀.၅၄၃ ၀.၃၄၄ ၀.၃၄၄ ၀.၁၀၀ ၀.၁၂၄ ၀.၂၂၅ ၀.၇၂၉ ၀.၂၇၁ ၁.၀၀၀ ၀.၂၉၁ ၀.၂၉၁
၂၃၆ ZZ Unclassified country ၁၀.၃၆၅ ၁.၈၉၈ ၁၂.၂၆၃ ၁.၂၀၈ ၁.၀၈၅ ၂.၂၉၃ ၂.၁၈၃ ၀.၈၂၇ ၃.၀၁ ၀.၃၁၉ ၃.၃၃၇ ၃.၆၅၆ ၀.၀၉၅ ၀.၀၉၅ ၀.၀၄၉ ၁.၉၆၅ ၂.၀၁၄ ၀.၀၈၁ ၂.၅၃၄ ၂.၆၁၅ ၄၅.၁၀၃ ၁၁.၇၁၃ ၅၆.၈၁၆ ၁၄.၄၅၂ ၀.၁၄၄ ၁၄.၅၉၆
စုစုပေါင်း ၉၁၃၅.၆၀၂ ၉၀၃၅.၀၆၃ ၁၈၁၇၀.၆၆၅ ၈၉၇၇.၀၁၆ ၉၀၆၈.၉၁၄ ၁၈၀၄၅.၉၃၀ ၁၁၂၀၃.၉၅၈ ၁၃၇၅၉.၅၀၇ ၂၄၉၆၃.၄၆၅ ၁၂၅၂၃.၇၁၇ ၁၆၆၃၃.၁၄၆ ၂၉၁၅၆.၈၆၃ ၁၁၁၃၆.၈၇၈ ၁၆၅၇၇.၉၄၈ ၂၇၇၁၄.၈၂၆ ၁၁၉၉၈.၅၄၄ ၁၇၂၁၁.၀၆၂ ၂၉၂၀၉.၆၀၆ ၁၄၈၅၀.၆၆၄ ၁၈၆၈၆.၉၅၂ ၃၃၅၃၇.၆၁၆ ၈၈၃၂.၁၂၀ ၉၈၅၉.၃၁၈ ၁၈၆၉၁.၄၃၈ ၁၇၀၆၀.၄၁၅ ၁၈၀၈၆.၅၉၇ ၃၅၁၄၇.၀၁၂ ၇၇၅၂.၉၈၂ ၈၇၃၄.၅၂၉ ၁၆၄၈၇.၅၁၁